Medical Writings: Basic Obstertics/Midwifery အခြေခံ သားဖွားပညာ
1. အမျိုးသမီး မျိုးပွားစနစ်၏ ခန္ဓာဗေဒ၊ Anatomy of female reproductive system
2. ရာသီဆင်းခြင်း၊ Menstruation (Menstrual cycle)
3. သန္ဓေဖြစ်ခြင်း၊ Fertalization
4. ကိုယ်ဝန်မဟုတ်ပဲ ရာသီသွေးမဆင်းခြင်း၊ Secondary Amenorrhea
5. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း Pregnancy
6. ကိုယ်ဝန်ဆောင် စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ Antenatal Care (ANC) Prenatal care
7. ဗိုက်စမ်းခြင်း၊ Abdominal examination
8. မွေးလမ်းကြောင်းအား စစ်ဆေးခြင်း၊ Vaginal examination
9. ကလေး၏ အနေအထားများ၊ Position and Presentation of the Fetus
10. မွေးဖွားပုံအဆင့် (၃ ဆင့်) Three Stages of Labor
11. အချင်း၊ ချက်ကြိုး၊ Placenta and Umbilical cord
12. မွေးဖွားနေစဉ် ကလေး၏ ခန္ဓာကိုယ်အနေအထား ပြောင်းလဲပုံ အဆင့်ဆင့်
13. မွေးဖွားခြင်းအကျဉ်းချုပ်Summary of labor
14. မွေးလမ်းကြောင်းချဲ့၍ မွေးပေးခြင်း၊ Episiotomy and Repair
15. အချင်းအားလက်ဖြင့် ထုတ်ပေးရခြင်း၊ Manual removal of placenta
16. မွေးဖွားပြီးနောက် စောင့်ရှောက်ပေးခြင်း Postdelivery (postpartum) period (PN Care)
17. ပုံမှန်မဟုတ်သော မွေးဖွါးခြင်း Complicated labor
18. မွေးခါစကလေး Newborn Baby
19. စောပြီးမွေးပေးခြင်း နှင့် မြန်မြန်မွေးအောင်လုပ်ပေးခြင်း၊ Induction and augmentation of labour Assisted Delivery
20. တင်ပါးဆုံပြုခြင်း Breech Presentation
21. ကလေး တယောက်မကဖြစ်ခြင်း Multiple Pregnancy
22. ကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်း Abortion
23. ဗိုက်ခွဲမွေးပေးခြင်း၊ Caesarean section (Cesarean section), C-section or Caesar (LSCS)
24. စပျစ်သီးခိုင်ကဲ့သို့ သားပျက်ခြင်း၊ H mole (Hydatidiform mole)
25. ကိုယ်ဝန်သွေးဆိပ်တက်ခြင်း Pre-eclampsia (PET) and Eclampsia or Toxemia
26. မမွေးမီသွေးဆင်းခြင်း Antepartum haemorrhage (APH)
27. သားအိမ်ပြင်ပ၌ သန္ဓေတည်ခြင်း Ectopic Pregnancy
28. လက်တွေ့ Practical training at Yamuna Clinic
သားအိမ်၊ ဆီးအိမ်၊ အပြင်အင်္ဂါ၏နှခမ်းသားအကြီး၊ မျိုးဥအိမ်၊ အစာဟောင်းအိမ်၊ သားအိမ်ဝ၊ မွေးလမ်းကြောင်း၊ စအို၊
မ-အစိ(ကလိုက်တောရစ်စ်)၊ မ-အင်္ဂါ၏နှခမ်းသားအကြီး၊ ဆီးသွားပြွန်အဝ၊ မွေးလမ်းကြောင်း၊ မ-အင်္ဂါ၏နှခမ်းသားအသေး၊ စအို၊
အမျိုးသမီး မျိုးပွားအင်္ဂါများ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မွေးခါနီး အနေအထား
Perimetrium အပေါ်ယံဖုံးအလွှာ၊ Myometrium သားအိမ်ကြွက်သား၊ Ovary အိုဗရီ၊ Endometrium သားအိမ်အတွင်းလွှာ၊
Cervix သားအိမ်ဝ၊ Vagina မွေးလမ်းကြောင်း၊ Placenta အချင်း၊ Fundus သားအိမ်ထိပ်ပိုင်း၊ Cord ချက်ကြိုး၊ Membrane and Sac ရေမြွှာအိပ်၊ Tail Bone မြီးညှောင့်ရိုး၊ Rectum အစာဟောင်းအိမ်၊ Perineum တင်ပဆုံအတွင်းအောက်ပိုင်း၊ Bladder ဆီးအိမ်၊ Pubic Bone ဆီးစပ်ရိုး၊ Thin Lower Segment ပါးသော သားအိမ် အောက်ပိုင်း၊ Thick Upper Segment ထူသော သားအိမ်အထက်ပိုင်း၊
(သားအိမ်၊ သားအိမ်အဝ၊ မွေးလမ်းကြောင်း) တို့နှင့် (ခါးရိုးမကြီး) ထဲရှိ အာရုံကြောများကြောင့်
ဗိုက်နာခြင်း၊ ကြွက်သားများ ကြီးခြင်း-ကြုံ့ခြင်း-နာခြင်းတို့ ဖြစ်ရသည်။
Uterus သားအိမ် 7.5 cm x5cm x 2.5 cm အရွယ်ရှိ၍ 30 to 40 gm လေးသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပဆုံရိုးကွင်း အတွင်း အလယ်၌ရှိသည်။ ၎င်း၏ရှေ့တွင် ဆီးအိမ်၊ နောက်တွင် အစာဟောင်းအိမ်၊ အောက်တွင် မွေးလမ်းကြောင်းရှိ သည်။ (သားအိမ်) ကို အပေါ်ထိပ်ပိုင်း၊ ကိုယ်ပိုင်း၊ လည်ပင်ပိုင်းနှင့် သားအိမ်အဝ ဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။ သားအိမ်၏ ကိုယ် ထည်ပိုင်းအား ကြွက်သားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ အထဲ၌ 6.25 cm ရှည်သော သားအိမ်အခေါင်းရှိသည်။ Utrine wall နံရံသည် ကြွက်သားဖြင့် လုပ်ထားသည်။
သားအိမ်ပြွန် Uterine (Fallopian) Tubes သားအိမ်၏ အထက်ပိုင်း ဘေးတဖက်တချက်စီမှ အခေါင်းပါသည့် 10 cm ရှည်သော သားအိမ်ပြွန် တခုစီရှိသည်။ ပြွန်၏ထိပ်ဝမှာ လက်ချောင်းပုံရှိသော အပေါက်ဝရှိသည်။ ၎င်းအပေါက်သည် ဝမ်းဗိုက်ထဲသို့ ပွင့်နေသည်။ ကိုယ်ဝန် လုံးဝမရစေရန် ခွဲစိတ်ပေးလျင် ၎င်းပြွန်နှစ်ဘက်လုံးအား ဖြတ်ပေးရသည်။
မျိုးဥအိမ်များ Ovaries သားအိမ်ပြွန်တခုစီ၏ အောက်နား တဖက်တချက်စီတွင်ရှိသည်။4cm x2cm x 8 mm အရွယ် ရှိ၍2to 3.5 gm လေးသည်။ တလလျင် မျိုးဥ ၁ ဥ ထွက်ပေးသည်။
သားအိမ်ဝ Cervix (Cx) သားအိမ်၏ အောက်ဆုံးပိုင်း ဖြစ်သည်။ အောက်တဝက်က မွေးလမ်းကြောင်းထိပ်အတွင်း ဝင်နေ သည်။ Internal Os အထဲပေါက်နှင့် External Os အပြင်ပေါက်တို့ရှိသည်။ အပြင်ပေါက်သည် ကလေးမွေးချိန်မှလွဲ၍ အမြဲ စေ့ပိတ်နေသည်။ တိုသော ရှေ့နုတ်ခမ်းနှင့် ရှည်သော နောက်နုတ်ခမ်းတို့ ရှိသည်။ (သားအိမ်ဝ) သည် တင်းမာ၍ ပန်း ရောင် ရှိပြီး၊ ပြောင်ချောနေသည်။ ကိုယ်ဝန်ရှိလျင် အရောင်ပြာလာသည်။ White discharge အဖြူဆင်းခြင်း၊ Cancer ကင်ဆာ ဖြစ်ခြင်းတို့သည် သားအိမ်ဝမှာ ဖြစ်သည်ကများသည်။
မွေးလမ်းကြောင်း Vagina3inches (7.5 cm) ရှည်သည်။ ၎င်း၏ရှေ့တွင် ဆီးအိမ်၊ နောက်တွင် အစာဟောင်းအိမ်တို့ ရှိကြသည်။ ကြွက်သားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
တင်ပဆုံရိုးကွင်း Pelvis gardle ကျား-မ တင်ပဆုံရိုးတို့၏ ခြားနာချက်များ = အမျိုးသမီးတင်ပဆုံရိုးသည် ပို၍သေး၊ ပို၍ ချောမွေ့၊ ပို၍ကျယ်ဝန်းသည်။ အထူးသဖြင့် အရိုးကွင်း၏ အထက်ဝင်ပေါက်သည် ပို၍ဘေးကားနေကာ ဝိုင်းသည်။ နောက်၌ရှိသော မီးညှောင့်ရိုးက ပို၍လှုပ်ရှားနိုင်ပြီး၊ အောက်ပိုင်း ထွက်ပေါက်သည် ဘေးသို့ကားသည်။
ကျား တင်ပဆုံရိုးကွင်း (ရှေ့မှမြင်ရပုံ) မ တင်ပဆုံရိုးကွင်း (ရှေ့မှမြင်ရပုံ)
တင်ပဆုံရိုးကွင်းတခြမ်း၊ (အတွင်းဘက်မှ ဘေးတိုက်ပုံ) မျဉ်း 1 သည် အပေါ်ပေါက်၊ မျဉ်း ၂ သည် အောက်ပေါက်၊ ကလေးဖွါးလျင် ၎င်း ၂ ပေါက်လုံးနှင့် ကလေးဦးခေါင်း ဆံ့မှသာ မွေးလမ်းကြောင်းမှ မွေးနိုင်သည်။ မဆံ့သည်ကို အရိုးကွင်းကျဉ်းသည်ဟု ခေါ်သည်။ အမှန်မှာ ကလေးခေါင်းနှင့် မိခင်အရိုးကွင်း မမျှခြင်း Cephalopelvic disporoprtion (CPD) ဖြစ်သည်။ LSCS လုပ်၍ မွေးပေးရသည်။
မွေးကာစ ကလေး၏ ဦးခေါင်း အမှတ်အသားများ
ငယ်ထိပ်-နောက်စေ့။ မဆက်သေးသည့် ဦးခေါင်း၏အရိုးများ၊ ငယ်ထိပ်သည် ၁၈ လမှာပိတ်သွားသည်။
နဖူးနှင့်နောက်စေ့အကွာအဝေးသည်ရှည်၍ ဦးခေါင်းကွေး၍ ငုံ့ထားလျင်ဖြစ်မည့် ကန့်လန့် အကွာအဝေးသည် အတိုဆုံးဖြစ်သည်။
A-B = ခေါင်းကွေးထားအနေသည့်အလျှား၊ C-D = ခေါင်းကွေးမနေသည့် အလျှား။ CD > AB
ရာသီဆင်းခြင်းဖြစ်စဉ်သည် မိန်းကလေး Puberty အရွယ်ရောက်သည့်အချိန်မှ Menopause သွေးဆုံးချိန်အတွင်း မျိုးပွား (ဟော်မုန်း) အမျိုးမျိုးတို့၏ အနည်း-အများ အပြောင်းအလဲများကြောင့်ဖြစ်ရသည်။ မျိုးပွား(ဟော်မုန်း)များတွင် (အီစရိုဂျင်)၊ (ပရိုဂျက်စတီရုံး)၊ (ဖေါ်လီကူလာ-ဟော်မုန်း)၊ (လူတီရယ်-ဟော်မုန်း) တို့ပါဝင်သည်။ သားအိမ်း၏ အတွင်းနံရံသည် လစဉ် အထူအပါး ပြောင်းလဲနေသည်။ လအစ ရာသီဆင်းပြီးချိန်၌ အပါးဆုံးဖြစ်ရာမှ တရက်ပြီးတရက် ထူလာသည်။ လလည် ရက်တွင် မျိုးဥအိမ်မှ မ-မျိုးဥ တဥထွက်သည်။ ၎င်းမျိုးဥသည် ကျားသုတ်ပိုးနှင့် တွေ့ပါက ကိုယ်ဝန်ဖြစ်မည်။ မ-မျိုးဥသည် ကျားသုတ်ပိုး နှင့် မတွေ့ပါက လကုန်သည်နှင့် သားအိမ်အတွင်း နံရံသည် အထူဆုံးအဆင့်မှ ပျက်စီးသွားကာ ရာသီသွေး အဖြစ် မွေးလမ်းကြောင်းမှ ဆင်းသည်။
လစဉ်ရာသီဆင်းပုံ။ ၂၈ ရက်ကို ၁ လဟု တွက်ထားသည်။ တယောက်နှင့် တယောက် မတူကြ။ ရက် ၃ဝ လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
၁ ရက်မှ ၆ ရက်အထိ သွေးဆင်းပြီး၊ သားအိမ်ကြွက်သားများ ပါးရာမှ ထူလာသည်။
၁၄ ရက် လလည်နေ့တွင် မျိုးလောင်းအိမ်မှ မျိုးဥထွက်သည်။
မ-မျိုးဥ ခေါ် Ovum (အိုဗမ်) သည် Ovary မျိုးဥအိမ်မှ ထွက်သည်။ 0.2 mm အရွယ်သာရှိသည်။ မိန်းကလေး အရွယ်ရောက်ချိန်တွင် ၃ သိန်းရှိမည်။ အချို့သာလျင် ရင့်မည့်သောဥအဖြစ် ပြောင်းလဲ နိုင် သည်။ သွေးဆုံးချိန်၌ မရှိကြတော့ချေ။ ရာသီတလအတွင်း မ-မျိုးဥ ခေါ် (အိုဗမ်) ၁ ဥသာ ထွက်သည်။
ကျား-သုတ်ပိုး Sperm Cell (Spermatozoon)
Semen ခေါ် ကျားသုတ်ရည် ၁ မီလီလီတာတွင် Sperm Cell ပေါင်း သန်းချီပြီးပါနေသည်။ အမျိုးသမီး၏ မွေးလမ်းအတွင်း ၃ ရက်ကြာ ရှင်နေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းရှင်နေစဉ် မ မျိုးဥ နှင့် တွေ့လျင် သန္ဓေတည်နိုင်သည်။
မ-မျိုးဥအိမ် Ovary မှ တလတကြိမ်ထွက်သည့် Ovum မ-မျိုးဥ တဥရှိနေစဉ် ကျား-မ အတူနေခဲ့လျင်၊ Sperm ကျားသုတ်ပိုးက မွေးလမ်းထဲမှ သားအိမ်၊ ထို့နောက် သားအိမ်ပြွန်ထဲ ဝင်လာသည်။ မ-မျိုးဥကလည်း ပြွန်ထဲဝင်လာကာ ပေါင်းစပ်ကြသည်။ (ဆဲလ်) ၁ ခုမှ ၂ ခု၊ ၄ ခု စသည် ပွားများလာသည်။ ပြွန်ထဲမှ သားအိမ်ထဲသို့ ပြန်ဆင်းလာပြီး၊ (ဆဲလ်) ပေါင်း မြောက်မြားစွာပွား၍၊ သန္ဓေသား Fetus ဖြစ်လာကာ အတွင်း နံရံ၌ တွယ်ကပ်လိုက်သည်။ ကိုယ်ဝန် Pregnancy ရှိပြီ။ ထိုအချိန် အထိ ၇-၈ ရက် ကြာသည်။ သန္ဓေသည် ၈ ပါတ်ဆိုလျင် ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောမှလွဲလျင် အင်္ဂါစုံပြီ။ အချင်းဖြစ်ပြီ။ ၁၂ ပါတ် ရှိလျင် သားအိမ်အပြည့် ဖြစ်လာသည်။ ၁၄ ပါတ် ရှိလျင် ကျား-မ ခွဲလို့ရပြီ။ ၁၈-၂၂ ပါတ် ရှိပါက Quickening ကလေး လှုပ်သည်ကို သတိထားမိမည်။
ကိုယ်ဝန်မဟုတ်ဘဲ၊ သွေးမဆုံးသေးဘဲ၊ မွေပြီးနို့တိုက်ချိန် မဟုတ်ဘဲ၊ ရာသီသွေးမဆင်းတော့ခြင်းသည် ကိုယ်အလေးချိန် အလွန်လျှော့ခြင်း၊ တိုးခြင်းတို့ကြောင့်၎င်း၊ ဆေးဝါးများကြောင့်၎င်း၊ စိတ်ပူပန်မှုကြောင့်၎င်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အကြောင်း ရင်းကို ကြည့်၍ ကုသပေးရမည်။ Imperforate hymen အပျိုမြှေးသည် လုံးဝ ပိတ်နေသောကြောင့် ရာသီသွေးသည် အပြင်မထွက်နိုင်ဘဲ၊ သားအိမ်နှင့် မွေးလမ်းကြောင်းထဲတွင် စုနေသည့် မွေးရာပါရောဂါရှိသည်။ ခွဲစိတ်ပြုပြင်ပေးရသည်။
Labia minora ကြွက်သားအသေး
ကိုယ်ဝန်ရှိ-မရှိစမ်းသပ်ခြင်း၊ Pregnancy Test
၉၉% မှန်ကန်သည်။ ကိုယ်ဝန်စရှိပြီး ၁ဝ ရက်ကြာလျင် စမ်းရပြီ။ အမျိုးသမီး၏ ဆီးထဲတွင် (hCG) Human Chorionic Gonadotropin ခေါ် အချင်းကထွက်သည့် ဟော်မုန်း ရှိ-မရှိ စမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်ပါက နံနက်ခင်းသွားသည့် ဆီးကို စမ်းရမည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဆိုသည် သန္ဓေသားတယောက်၊ သို့မဟုတ် တယောက်မက ရှိလာခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ဝန်တခုကို ပဌမ (၃)လ၊ ဒုတိယ(၃)လ၊ တတိယ(၃)လဟု ပိုင်းခြား လေ့လာသည်။ ပဌမ (၃)လသည် ကိုယ်ဝန်ပျက်ရန် အဖြစ်နိုင်ဆုံး ကာလဖြစ်သည်။ ဒုတိယ(၃)လတွင် ကလေး၏ ဖွံ့ထွားမှုများကို ကောင်းစွာ စောင့်ကြည့်နိုင်ပြီ။ တတိယ (၃)လသည် ကလေးသည် ရှင်မလား၊ ဆေးမကူဘဲ မွေးမည်လား ဆိုသည်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၇ဝ-၈၅% ဖြစ်တတ်။ ပျို့-အန်ခြင်း၊ ရင်သားနာခြင်း၊ အစာအိမ်ပြဿနာပေးခြင်း၊ အားယုတ်ခြင်း၊ မကြာ ခဏဆီးသွားခြင်း၊ မောပမ်းခြင်း၊ သွေးအနည်းငယ် ဆင်းခြင်း၊ ယခင်ကထက် အားအင်ပြည့်၊ အလေးချိန် တိုးလာမည်။ အနေအထိုင် ခက်ခဲလာမည်။ အရေပြားပြောင်းလဲမှုများရှိမည်၊ သွင်ပြင်လက္ခဏာများ နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်း ပြောင်း လာသည်။
Hyperemesis Gravidarum ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အလွန်အကြွံ အန်ခြင်း။ ဆိုးရွားသည်။ ကြာလျင် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့၊ အာဟာရနည်း၊ ဓါတ်ဆား အချိုးအဆ ပြောင်းလဲခြင်းတို့ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ကိုယ်ဝန် ၈-၁၂ ပတ်မှာ အဖြစ်များသည်။ အနားယူခိုင်းပါ။ အစာကို နည်းနည်းနှင့် အကြိမ်ခွဲပေးပါ။ ပရိုတင်းများများ ကြွေးသင့်ပြီး၊ အဆီနှင့်အစပ် လျှော့သင့်သည်။ NS/RL သွင်းပေးဘို့ လိုနိုင်သည်။ ဂလူးကို့စ်၊ ဗီတာမင် B 1, B 6, မဂ္ဂနီဆီယမ် ပေးရမည်။
အအန်သက်သာရန် Doxylamine 10 mg နှင့် Vitamin B6 10 mg ရောပေးသင့်သည်။ Promethazine 12.5-25 mg ကို ၄ နာရီခြား၊ Prochlorperazine 25 mg ကို စအိုမှ ၁၂ နာရီခြား ပေးနိုင်သည်။ Meclizine, Dimenhydrinate, Metoclo-pramide တို့ကိုလည်း ပေးနိုင်သည်။ Corticosteroids (Methylprednisolone 16 mg စားဆေး IV every 8 hours) ကို နောက်ဆုံး အဖြစ်ပေးနိုင်သည်။ ကိုယ်ဝန်နုစဉ် Corticosteroids မပေးသင့်။ ဂျင်း(ချင်း) Ginger capsules of 250 mg taken4QID လည်း ကောင်းသည်။
• အသက်ရှူခက်ခဲခြင်း၊ ခါးမတ်မတ် ထိုင်ပါ။ အိပ်လျင် ခပ်မတ်မတ် အိပ်ပါ။ အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ။
• ကြွက်သားနာခြင်း၊ (ကယ်လ်စီယန်) ဆေးစားပါ။ လှုပ်ရှားလျင် သက်သက်သာသာလုပ်ပါ။
• ပျို့-အန်ခြင်း၊ အိပ်ရာထ ထချင်း ဘီစကစ်။ ပေါင်မုံ့ကင်စားပါ။ အိပ်ရာထလျင် ချက်ချင်း အိပ်ရာကမဆင်းရ။ မကြိုက်သည့် အနံ့အသက် ရှောင်ပါ။ အန်တာများက ဆရာဝန်ပြပါ။
• Varicose veins သွေးပြန်ကြောထုံးခြင်း၊ ခြေထောက် မြှင့်ထားပါ။ လှည်းနေပါ။ အကြာကြီးမရပ်-မသွားရ။ ခြေအိပ်-ဖိနပ် အကြပ် မစီးရ။ အထူးလုပ်သားသည့် ခြေအိပ်သုံးပါ။ အမြဲထိုင်မနေရ။
မိခင်လောင်းတိုင်းအား သာမန်အားဖြင့် ရက်သတ္တ ၄ ပါတ်မှ ၂၈ ပါတ် အတွင်း တလတကြိမ်။ ၂၈ ပါတ် မှ ၃၆ ပါတ် အတွင်း တလ ၂ ကြိမ်၊ ၃၆ ပါတ် မှ မွေးသည်အထိ တပါတ်တကြိမ်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင် စောင့်ရှောက်ခြင်း ANC လုပ်ပေး ရမည်။ ကိုယ်ဝန်နှင့် ပတ်သက်သော အသိပညာပေးရမည်။ Body weight အလေးချိန်၊ Blood pressure သွေးဖိအား တိုင်းပါ။ ကလေးအနေအထားနှင့် ကြီးထွားမှုများ မှတ်တမ်းတင်ပါ။ ကလေးနှလုံးခုန်သံ။ Fetal Heart Sound (FHS) နားထောင်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အားဆေးများပေးပါ။
နောက်ဆုံးရာသီပေါ်ခဲ့သည့်နေ့ Last Menstrual Period (LMP) နောက်ဆုံး သွေးဆင်းသောလတွင် ပဌမဆုံး စလာသည့် နေ့ကိုယူပါ။ မွေးဖွားမည့်ရက် Expected Due Date (EDD) တွက်ပါ။ LMP ထဲသို့ ၉ လနှင့် ၇ ရက် ပေါင်းထည့်ပါက EDD ရသည်။ အမှန်မှာ EDD ၏ ရှေ့-နောက် ၂ ပါတ်အတွင်း မွေးနိုင်သည်။ သာမန်အားဖြင့် နောက်ဆုံး ရာသီပေါ်အပြီး ရက်ပေါင်း ၂၈ဝ သို့မဟုတ် ရက်သတ္တပါတ် ၄ဝ ဖြစ်သည်။ သို့သော် (၃၇-၄၂) ပါတ်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မှတ်တမ်း ရေးမှတ်ရာတွင် ၁ ပါတ် = ၇ ရက်၊ တလ = ၄ ပါတ်၊ တလ = ၃ဝ ရက်၊ ဖြင့်သာ တွက်ယူပါ။
• သွေးအုပ်စု။ (A, B, AB, or O)
• (အာရ်အိခ်ျ-ဖက်တာ) Rh factor
• (ဟီမိုဂလိုဗင်) Hemoglobin (Hb) (Adult males: 14-18 gm/dl and Adult women: 12-16 gm/dl)
• (ဟက်ပတိုက်တစ်-ဘီ) Hepatitis B virus
• ဆီးထဲရှိ သကြားဓါတ် Urine Sugar
• ဆီးထဲရှိ ပရိုတင်းဓါတ်၊ Urine Albumin
• လိင်မှတဆင့် ကူးစက်ရောဂါများ (STDs, STIs)
• Ultrasound (အာလ်ထွာဆောင်း) ရိုက်ခြင်း၊
သားအိမ်၏အမြင့်ကို စမ်းခြင်း၊ လူနာ၏ ညာဖက်ကနေပါ။ ဝဲဖက် လက်ဝါးစောင်းဖြင့် ကိုယ်ဝန်၏ အမြင့်ဆုံးကို ရှာ၍ ကိုယ်ဝန်သည် မည်မျှ ရှိသနည်းကို ခန့်မှန်းရသည်။ ယင်းနေရာ၌ ကလေး၏ မည်သည့် အစိတ်အပိုင်း ရှိနေသနည်း။ ကလေး၏ ဦးခေါင်းသည် လုံးဝန်း၍ မာပြီး၊ တင်ပဆုံသည် ခေါင်းလောက်မမာ၊ ခေါင်းလောက် မလုံးဝန်းခြေ။ ကလေး၏ ဦးခေါင်းသည် ဇောက်ထိုး သို့မဟုတ် မိခင်၏ ဆီးစပ်ရိုးတွင် ရှိနေသည်က အများဆုံးဖြစ်သည်။ Breech ခြေကဖွါးမည့် ကလေးဆိုလျင် ကလေး၏ တင်ပါးက မိခင်၏ ဆီးစပ်နေရာမှာ ရှိမည်။
• ဆီးစပ်ရိုးအထက် ကိုယ်ဝန်စပြီး စမ်းရချိန်သည် ၁၂ ပါတ် ၃ လ။ ကိုယ်ဝန် ၃ လထက်စောလျင် ဗိုက်ကနေ စမ်းမရ။ မွေးလမ်းကြောင်းထဲ လက်တဖက်ထည့်လျက် တဖက်က ဗိုက်မှ စမ်းရသည်။
• ချက်၏ အောက် ၂ဝ ပါတ်၊
• ချက်၏အထက် ၂၂ ပါတ်၊
• အမြင့်ဆုံးသည် ၃၈ ပါတ်၊ အမြင့်ဆုံး (ရင်ခေါင်းဆိုက်ချိန်) သို့မဟုတ် နံရိုးအောက်ဆုံးနှင့် ထိချိန်၊
• ၄ဝ ပါတ် မွေးခါနီးလျင် ကလေး ဦးခေါင်းအရိုးကွင်းထဲ ဝင်သွား၍ အနည်းငယ် အောက်ကျလာသည်။
သားအိမ်ထိပ်မှာ လက်တဖက်တင်ထားလျက်၊ ကျန်လက်တဖက်၏ လက်မနှင့်ကျန်လက်ချောင်းတို့ဖြင့် ဆီးစပ်နေရာကို စမ်းပါ။ ဦးခေါင်း သို့မဟုတ် တင်ပဆုံတခုခု စမ်း၍ရမည်။ ၎င်းအစိတ်အပိုင်းအား ဘေးတဖက်တချက်သို့ လှုပ်ကြည့်ပါ။ မွေးကာနီး၌ ကလေး၏ဦးခေါင်းသည် မိခင်၏အရိုးကွင်းထဲ ဝင်လာပြီဆိုလျင် ဘေးတိုက် ရွေ့ကြည့်ပါက မရတော့။
ကိုယ်ဝန်၏ ဘေးတဖက်တချက်အား ညင်သာသော ဖိအားသုံး၍ မိမိ၏ လက်ဝါးနှစ်ဖက်ဖြင့် စမ်းရသည်။ ကလေး၏ ကျောရိုးဖက်နှင့် ရှေ့ဖက်တို့အားရှာရသည်။ ကျောရိုးသည် မာကြောသည်။ ရှေ့ဖက်မှာ ကလေး၏ လက်၊ ခြေများရှိသည်။ ကလေးအမွှာဖြစ်ပါက ခေါင်း ၂ လုံး ရှာ၍ ရမည်။ ကလေးကန့်လန့်ဖြစ်နေလျင် သိသာမည်။
ကိုယ်ရောင်ခြင်း။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်၏ ခြေထောက် (ခြေသလုံး) အား အရိုးပေါ်နေရာကို လက်ချောင်း ၁ ချောင်းဖြင့်ဖိ၍ ခဏအကြာ ပြန်လွတ်ပြီး၊ ဖိသည့်နေရာသည် ခွက်ဝင်သွားခြင်းရှိပါက Pitting Oedema ရှိသည်ဟုခေါ်သည်။
Fetal Heart Sound (FHS) ကလေး၏ နှလုံးခုန်သံအား နားထောင်ခြင်း
ကိုယ်ဝန် ၂၂ ရက်ကစ၍ ကလေးနှလုံးစခုန်သည်။ ၉-၁ဝ ပါတ်ဆိုလျင် နားထောင်နိုင်သည်။ မိခင်၏နှလုံးခုန်သံသည် တမိနစ်လျင် ၁ဝဝ ထက်မပို။ ကလေးသည် ၁၂ဝ-၁၆ဝ ခုန်မည်။ ကလေး၏ ခါးရိုးဖက်က ပိုကြားရမည်။ နားကြပ်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ Fetal Doppler ကရိယာဖြင့် အကောင်းဆုံး ကြားရမည်။
ဗိုက်ထဲရှိကလေး၏ နှလုံးခုန်သံ FHS
ရက်သတ္တပါတ် ၂ မှ ၄ဝ အထိ
• တိုးလာသောနို့ = ၂ ပေါင် • ကြီးလာသောသားအိမ် = ၂ ပေါင်
အပြင်မှစစ်ဆေးခြင်း အပြင်မှ အရောင်အဆင်း၊ ယားယံခြင်းလက္ခဏာ၊ အလုံး-အကြိတ်၊ တခုခုဆင်းခြင်း၊ မွေးရောပါရောဂါ ရှိမ-ရှိ ကြည့်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အား လက်ဖြင့်စမ်းခြင်း။ စမ်းသပ်သူ၏ လက် ၁ ချောင်း သို့မဟုတ် ကလေးထွက်ခါနီးလျင် လက် ၂ ချောင်း ဖြင့် စမ်းပါ။
(၁) သားအိမ်သည် ရှေ့က ဆီးအိမ်အပေါ်ကိုင်းနေခြင်း Antiverted Uterus (AV) သို့မဟုတ် နောက်ဖက်သို့ ကိုင်းနေခြင်း Retroverted uterus (RV) တမျိုးမျိုးရှိမည်။ ပုံမှန်သာဖြစ်သည်။
(၂) သားအိမ်အဝ၏ အကျယ်အား စမ်းသည်။ မွေးဖွားခြင်း ဒုတိယဆင့်တွင် ဝ စင်တီမီတာမှ ၁ဝ စင်တီမီတာ အထိကျယ် လာမှ မွေးမည်။ လက်ချောင်း ၁ ချောင်းကျယ်သည်ကို 1/5 (1F) ဟု ခေါ်သည်။ 2/5, 3/5, 4/5 နောက်ဆုံး Os Full = 10 cm
(၃) သားအိမ်လည်ပင်း မည်မျှရှည်သနည်းကို စမ်းရသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၃-၄ စင်တီမီတာရှည်သည်။ မွေးခါ နီးလေ တိုလေဖြစ်သည်။ သားအိမ်အဝအထက် ကလေး၏ ဦးခေါင်းကို ထိရန် မည်မျှ ဝေးသနည်းကို ကြည့်ရသည်။ သားအိမ်အဝ၏ အမာ-အပြော့ စမ်းသည်။ မွေးခါနီးလျင် ပြော့လာရမည်။
(၄) ကလေး၏ ဦးခေါင်းသည် မိခင်အရိုးကွင်းရှိ အကျဉ်းဆုံးနေရာဖြစ်သော (အစ်ချီရယ်-စပိုင်း) နှစ်ခု၏ အထက်-အောက် မည်သည့်နေရာတွင် ရှိနေသနည်း။ ၎င်း၏အောက် ရောက်လာလျင် ကလေးကို မွေးလမ်းကြောင်းက မွေးနိုင် သည်။ အတွေ့အကြုံရှိမှ စမ်းတတ်မည်။
(၅) သားအိမ် ကျယ်လာပါက ကလေး၏ဦးခေါင်းကို စမ်း၍ရမည်။ ဦးခေါင်းပေါ်တွင် ရေမြွှာအိတ် (မပေါက်သေး ပါက) ဖုံးနေမည်။ ညှစ်လိုက်လျင် စူလာမည်။ ကလေး၏ ဦးခေါင်း မဟုတ်ပါက တင်ပါးဆုံကို စမ်း၍ရမည်။ သို့မဟုတ်ပါက အချင်းကို စမ်းတွေ့ရမည်။
ကိုယ်ဝန်မဟုတ်သူများအား စမ်းခြင်း စမ်းသပ်သူ၏ လက် ၁ ချောင်းကို မွေးလမ်းကြောင်းထဲထည့်သွင်းလျက် တခြားလက်တဖက်က ဝမ်းဗိုက်၏ အောက်ပိုင်းအား ဖိထားကာစမ်းရသည်။ သားအိမ်၊ သားအိမ်ပြွန်၊ မျိုးဥအိမ် စသည်တို့အား လက် ၂ ဖက်ဖြင့် ဖိ၍စမ်းရသည်။ ကိုယ်ဝန် ၃ လအောက် အား ဤနည်းဖြင့် စမ်းနိုင်သည်။ သားအိမ်အဝ နှင့် အဝ၏ ဘေးနေရာများ စမ်းလျင် နာ-မနာ စစ်ဆေးပါ။ ပိုးဝင်နေက နာမည်။
မွေးလမ်းကြောင်းအား Speculum ကရိယာဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တိုင်းအား စမ်းရန်မလို။ Speculum ကရိယာ ထည့်၍ မွေးလမ်းကြောင်းနှင့် သားအိမ်ဝထိပ် အရောင်၊ တခုခုဆင်းခြင်း ရှိ-မရှိ၊ အနာ-အလုံး-အကြိတ်ရှိ-မရှိ၊ နာကျင်ခြင်း ရှိ-မရှိ၊ သားအိမ်ထိပ်ဝ ပွင့်နေခြင်း ရှိ-မရှိ ကြည့်ပါ။
(လစ်သော်တော်မီ) အနေအထား Lithotomy position
မွေးလမ်းကြောင်းထဲ လက် ၁ ဖက်ထည့်၊ ၁ ဖက်က ဗိုက်ပေါ်တင်လျက် ကိုယ်ဝန်ရှိခါစကို စမ်းသပ်ခြင်း။
ကလေး၏ အနေအထားများဆိုသည်ကို ၂ မျိုး ကြည့်ရမည်။ ဒေါင်လိုက်လား၊ ကန့်လန့်လာ။ ဒေါင်လိုက်ဆိုလျင်လည်း မိခင်၏ ဆီးစပ်နေရာတွင် Cephalic ခေါင်းလား၊ Breech တင်ပဆုံလား။ ခေါင်းဆိုပြန်လျင်လည်း ကလေး၏နောက်စေ့က ရှေ့မှာလား၊ နောက်မှာလား။ ခေါင်း သို့မဟုတ် တင်ပါးသည် မိခင်၏ မွေးလမ်းတွင် Present လုပ်နေခြင်း၊ ကလေးသည် မည်သည့် Position နေရာ ရောက်နေသနည်း။ ရှေ့လှည့်-နောက်လှည့်၊ အရိုးကွင်း အထက်-အောက်။
ပုံမှန်အနေအထား။ ကိုယ်ဝန် ၉၉့၅% တွင် ကလေးဒေါင်လိုက်၊ ဇောက်ထိုးနေမည်။ ထို့ပြင် ကလေး၏နောက်စေ့က ရှေ့၊ မျက်နှာက နောက်ရှိသည်။ ဦးခေါင်းကို ရင်ဘတ်ထိ အောင်ကွေးထားမည်။ ခြေ-လက်များက ရင်ဘတ်ရှေ့ကွေးနေသည်။ ဦးခေါင်း နှင့် ကိုယ်သည် တဖက်ဖက် အနည်းငယ် လှည့်နေမည်။
Sinciput = လေး၏နဖူးထိပ် Occiput = ကလေး၏နောက်စေ့ အကောင်းဆုံး ကလေးအနေအထား
ကလေးဦးခေါင်းသည် ကောင်းကောင်း ကွေးနေခြင်းကြောင့် လုံးပါတ် အကျဉ်းဆုံး အနေအထားကို ရစေသည်။ ကလေး၏ ဦးခေါင်းက အောက်စိုက်နေပြီး၊ ကလေး၏မျက်နှာက မိခင်၏ နောက်ဖက် နှင့် ဘယ်ဘက် သို့မဟုတ် ညာဖက်သို့ မျက်နှာမူ နေသည်။ ကလေး၏ ဦးခေါင်းသည် ငုံ့ထားပြီး၊ မေးစေ့က ရင်ဘတ်နှင့် ထိနေသည်။ ခေါင်းမငုံ့ဘဲ နောက်စေ့ Occiput နှင့် နဖူး Sinciput တို့က ရေပြင်ညီ တန်းနေလျင် ပို၍ကျယ် မည်။ မွေးလမ်းနှင့် မဆန့်ဖြစ်မည်။
ပုံမှန်မဟုတ်လျင် ကလေး၏ ဦးခေါင်းက အထက်၊ သို့မဟုတ် ကလေးကန့်လန့်၊ တမျိုးမျိုး ဖြစ်တတ်သည်။ ဦးခေါင်းက အောက်ရှိသော်လည်း မျက်နှာက ရှေ့လှည့်ဖြစ်နိုင်သည်။ မျက်နှာ၊ ပခုံး၊ တင်ပဆုံ၊ လက်မောင်း စသည်တို့သည် မွေးလမ်း ဆီသို့ ပြုနေတတ်သည်။ ဦးခေါင်း ငိုက်မနေပါက မွေးလမ်းပို၍ ကျယ်ကျယ် လိုအပ်သဖြင့် အလွယ်နှင့် မွေးမရနိုင်။
ပုံမှန် (ခေါင်းအောက်၊ မျက်နှာနောက်)။ ပုံမှန်မဟုတ်သော Breech တင်ပဆုံပြုခြင်း၊ Face မျက်နှာပြုခြင်း၊ Shoulder ပခုံးပြုခြင်း၊
(LOA) Left Occipito Anterior (နောက်စေ့–ဘယ်ဖက်-ရှေ့ပိုင်း ပြုနေခြင်း) (ပုံမှန်)
(ROA) Right Occipito Anterior (နောက်စေ့–ညာဖက်-ရှေ့ပိုင်း ပြုနေခြင်း) (ပုံမှန်)
(LOP) Left Occipito Posterior (နောက်စေ့–ဘယ်ဖက်-နောက်ပိုင်း ပြုနေခြင်း) (ပုံမှန်)
(ROP) Right Occipito Posterior (နောက်စေ့–ညာဖက်-နောက်ပိုင်း ပြုနေခြင်း) (ပုံမှန်)
(LOT) Left Occipito Transverse (နောက်စေ့–ဘယ်ဖက်-ဘေးတိုက် ပြုနေခြင်း)
(ROT) Right Occipito Transverse (နောက်စေ့–ညာဖက်-ဘေးတိုက် ပြုနေခြင်း)
Brow position မျက်ခုန်းပြုအနေအထား Face position မျက်နှာပြုအနေအထား Transverse position ကန့်လန့်အနေအထား
Left Occiput Anterior (LOA) (နောက်စေ့–ဘယ်ဖက်-ရှေ့ပိုင်း ပြုနေခြင်း) (ပုံမှန်)
Right Occiput Anterior (ROA) (နောက်စေ့–ညာဖက်-ရှေ့ပိုင်း ပြုနေခြင်း) (ပုံမှန်)
Left Occiput Transverse (နောက်စေ့ – ဘယ်ဖက် ကန့်လန့်ပြုနေခြင်း)
Right Occiput Transverse (နောက်စေ့ - ညာဖက်ကန့်လန့်ပြုနေခြင်း)၊ Occiput Anteria (နောက်စေ့ - ရှည့်တည့်တည့်ပြုနေခြင်း)
Abdomen = ဝမ်းဗိုက်
Pelvic brim = တင်ပဆုံရိုးကွင်း၏ အပေါ်မျက်နှာပြင်။
Pelvic cavity = တင်ပဆုံရိုးကွင်း အတွင်းပိုင်း၊
(O) = နောက်စေ့။ (S) = နဖူး။
ကလေးဦးခေါင်းသည် မိခင်၏ အရိုးကွင်းမျက်နှာပြင်၏ အထက်ရှိနေရာမှ တဖြည်းဖြည်း အောက်ကျလာသည်။
(A) Chin Anterior မေးစေ့ရှေ့။ (B) Chin Posterior မေးစေ့နောက်၊
ကလေး၏ဦးခေါင်းသည် မိခင်အရိုးကွင်းရှိ အကျဉ်းဆုံးနေရာဖြစ်သော (အစ်ချီရယ်-စပိုင်း) နှစ်ခု၏ အထက်မှ အောက်သို့ တဖြေးဖြေး ဆင်းလာရမည်။ (- ၅ မှ + ၅ စင်တီမီတာ)
Dilation of Cervix သားအိမ်အဝ အဆင့်ဆင့် ကျယ်လာခြင်း သားအိမ်အဝသည် ပြော့လာရသည်။
A = သားအိမ်အဝ မကျယ်သေး။
သားအိမ်နှုပ်ခမ်း ၄ စင်တီမီတာ ရှည်နေသေးသည်။
B = သားအိမ်အဝ ကျယ်လာသည်။
သားအိမ်နှုပ်ခမ်း ၂ စင်တီမီတာ ရှည်နေသေးသည်။
C = သားအိမ်နှုပ်ခမ်း လုံးဝပါးသွားပြီ။ သားအိမ်အဝ အပြည့်အဝ မကျယ်သေး။
D = သားအိမ်အဝ ၃ စင်တီမီတာကျယ်လာသည်။
E = သားအိမ်အဝ ၈ စင်တီမီတာကျယ်လာသည်။
သားအိမ်အဝသည် (၁ဝ စင်တီမီတာ) အထိကျယ်လာမှ ကလေးထွက်မည်။
မမွေးမီ သားအိမ်အဝ၌ အချွဲပိတ်နေသည်။
သားအိမ်အတွင်းနံရံတွင် ကပ်နေသည့် ရေမြွှာအိပ်အထဲရှိ ရေမြွှာရည်၊ သားအိမ်အဝသည် ရှည်ပြီး၊ ထူ၍ ပိတ်နေသည်။
မွေးကာနီး (ရှိုး)ဆင်းနေသည်။ သားအိမ်အဝ အပေါ်မှစ၍ ပွင့်လာသည်။ ရေမြွှာအိပ် စူဖေါင်းလာသည်။
သားအိမ်ကြွက်သားများသည် မြားများ၏ ဦးတည်ရာအတိုင်း ကလေးအပေါ် ဖိအားသက်ရောက်နေသည်။
သားအိမ်အဝသည် ၃-၄ စင်တီမီတာကျယ်လာပြီ။ သားအိမ်နုတ်ခမ်းပါးလာကာ တိုသွားပြီ။ ရေမြွှာအိတ်စူနေသည်။
သားအိမ်ဝသည် ၇-၈ စင်တီမီတာ ကျယ်လာပြီ။ သားအိမ်နုတ်ခမ်းလည်း ပါး၍ တိုသွားပြီ။
သားအိမ်အဝလုံးဝကျယ်ပြီး ရေမြွှာအိပ် မပေါက်မီ အောက်သို့ စူလာသည်။
သားအိမ်အဝလုံးဝပွင့်ပြီး။ ကလေး၏ဦးခေါင်းသည် အောက်သို့ စူထွက်လာသည်။ Head Moulding ဟု ခေါ်သည်။
အမွေးသင်ခြင်း False labor pain သားဦးမိခင်များသည် အမှန်တကယ် မမွေးမီ မွေးချင်သလို ဗိုက်နာတတ်သည်။ ဗိုက်ပေါ်တွင် လက်တင်ထားလျက် သားအိမ်ညှစ်လာလျင် တင်းလာမှ တကယ် ဗိုက်နာခြင်းဖြစ်သည်။
Early rupture of membranes အချိန်စော၍ ရေမြွှာပေါက်ခြင်း
၁ဝ%သော မွေးလူနာများတွင် ဖြစ်တတ်သည်။ ရေမြွှာရည်များ ဆင်းလာမည်။ တစိမ့်စိမ့် ဆင်းနိုင်သည်။ အများအပြား ဆင်းနိုင်သည်။ ပန်းထွက်သလိုလည်း ထွက်နိုင်သည်။ ရေမြွှာပေါက်ပြီးတော်တော်နှင့် ကလေးမမွေးပါက ရောဂါပိုးဝင်မည်။ ပဋိဇီဝဆေး ပေးရမည်။
10. Three Stages of Labor မွေးဖွားပုံအဆင့် (၃ ဆင့်)
First Stage ပဌမအဆင့်
ဗိုက်စတင်နာသည်မှ သားအိမ်အဝ လုံးဝကျယ်သည်အထိ။ ဗိုက်သည် စနာလျင် နာလိုက် ရပ်လိုက်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် တိုး၍တိုး၍ နာလာ မည်။ နာချိန်ကြာ၍ နားချိန်တိုလာမည်။ ပိုနာလာရမည်။ ဝမ်းခြူပေးပါ။ သားအိမ် နှုတ်ခမ်းသည် ပြော့လာမည်၊ ပါးလာမည်။ တိုလာမည်၊ ကျယ် လာမည်။ ဦးခေါင်း အောက်ဆင်းလာမည်။ မိခင်က ညှစ်ချင်လာမည်။ သားဦးမှာ ၁၂-၁၆ နာရီ၊ နောက်ကလေး ၆-၈ နာရီ ကြာတတ်သည်။ ကလေးခေါင်းက မိခင်၏အ စာဟောင်းအိမ်ကို ဖိတိုးသောကြောင့် ဝမ်း သွားချင်စိတ် ဖြစ်လာမည်။ ရေမြွှာပေါက်မည်။ Show ရှိုး ခေါ် အကျိအချွဲ နှင့် သွေးရော၍ ဆင်းမည်။ လိုအပ်လျင် ဆီးခြူပေးပါ။
Second Stage ဒုတိယအဆင့်
ကလေးဦးခေါင်းသည် ဘေးတဖက်သို့ စောင်းနေ၍ အထဲကကလေး၏ပခုံးနှင့် တသားတည်းမရှိပုံ။
သားအိမ်အဝ အပြည့်ကျယ်လာပြီးနောက် ကလေးမွေးပြီးသည်အထိ။ မိခင်က ညှစ်ချင်လာမှသာ ဒုတိယ အဆင့်ကို စနိုင်သည်။ သားအိမ် ကြွက်သားများက ညှစ်ခြင်းကြောင့် ကလေးသည် မွေးလမ်းကြောင်းထဲ ဆင်းလာသည်။ ခေါင်းသည် မေးနှင့်ရင်ဘတ် ထိနေအောင် ငိုက်လာရ မည်။ တဖက်ဖက် စောင်းနေခဲ့ရာမှ တည့်လာမည်။ မွေးကာနီး ရေမြွှာ ပေါက်မည်။ ရေမြွှာ မပေါက်သေးဘဲ၊ ကလေးခေါင်းထွက်မှ ပေါက်တတ် သည်လည်းရှိသည်။ ရေမြွှာရည်ကို စစ်ပါ။ ကလေးဦးခေါင်းသည် မိခင်၏ မွေးလမ်း အပေါက်မှ စထွက်ပြူလာသည်ကို Crowning သရဖူဆောင်း သည်ဟု ခေါ်သည်။ မွေးလမ်းအဝ တဝှိုက် ရေနွေးဝတ်ဖြင့် ကပ်ပေးပါ။ ဝမ်းထွက်လာလျင် သန့်ရှင်းပေးပါ။
မိခင်ကို အားပေးပါ။ ဗိုက် မနာချိန်မှာ ရေ-အရည် အသောက်ခိုင်းပါ။ အသက်ကောင်းကောင်း ရှူရန်ပြောပါ။ ခေါင်းပြူလာလျင် သားဖွါးဆရာမ ၏လက်က ထွက်လာနေသည့် ကလေး၏ ဦးခေါင်းထိပ်ကို အောက်ဖက် ဆီသို့ ဖိပေးပြီး၊ နောက်တဖက်က မိခင်၏ မွေးလမ်းအဝ အောက်ပိုင်း နေရာကို ကလေး ဦးခေါင်းအား နောက်-အထက်ဆီသို့ တွန်းတင်ပေးပါ။ ခေါင်းစွပ် ချွတ်ပေးသလို ဖြစ်စေရမည်။ ကလေးဦးခေါင်းသည် မိခင်၏ မွေးလမ်းအဝမှ ရေပြင်ညီ တန်းတန်းထွက်လာသည်မဟုတ်။ အောက်ဆီ သို့ ဦးတည်ပြီး မွေးလာသည်။ မွေးလမ်းကြောင်းမှ ထွက်လျင် ထွက်ချင်း ကလေးဦးခေါင်းသည် အပေါ်သို့ ကော့တက်လာမည်။
ကလေး၏ နှာခေါင်းနှင့် ပါးစပ်တို့ကို သန့်ရှင်းပေးပါ။ ချက်ကြိုးက လည် ပင်းမှ ပတ်နေ-မနေ စစ်ပါ။ ပတ်နေလျင် ဖြည်ပေးပါ။ ကလေး၏ မျက်နှာ သည် တဖက်ဖက်သို့ လည်လာသဖြင့် မိခင်၏ပေါင် တဖက်သို့ မျက်နှာမူ လာမည်။ ခေါင်းထွက်ပြီးလျင် ကလေး၏ပခုံးတို့သည် အထက်-အောက် အနေအထားအဖြစ် ပြင်လာမည်။ ရှေ့ပခုံးကစမွေးမည်။ မိခင်က နောက် တကြိမ် ညှစ်သည်နှင့် ကလေး၏ ခေါင်းအား အောက်ဖက်ဆီသို့ အနည်း ငယ် ဆွဲယူပေးပါ။ ပြီးလျင် နောက်ပခုံး မွေးရန် ကလေးအား အထက် ဆီသို့ ပင့်တင်ပေးရမည်။ ကိုယ်ပိုင်းနှင့် ခြေထောက်များ မွေးလာမည်။
ကလေး ခေါင်းစ-ခြေဆုံး၊ ခြေစ-ခေါင်းဆုံး၊ ထွက်ပြီးပြီးချင်း၊ ချက်ကြိုးကို (စပန့်ခ်ျ-ဖေါ့ဆက်ပ်) ၂ ချောင်းဖြင့်3cm ခြာ၍ညှပ်ပါ။ ကလေးဖက်တွင် ချက်ကြိုးကို ရှည်နိုင်သမျှ ရှည်ပါစေ။ (ဖေါ့ဆက်ပ်) ၂ ချောင်းအကြားမှာ ကပ်ကြေးဖြင့်ဖြတ်ပါ။ ကလေးခြေထောက်နှစ်ချောင်းပူးလျက် ဆရာမ၏ လက် တဖက်တည်းဖြင့် ကလေးကို ဇောက်ထိုး မြှောက်၍ ကိုင်ပါ။ ကလေးမငိုသေးလျင် ကျောကို ပုတ်ပေးပါ။ ကလေးငိုလာမှ ချက်ကြိုး ဖြတ်က ပိုကောင်းသည်။ သားဦးမိခင်သည် ၄၅ မိနစ်မှ ၁ နာရီ ကြာ တတ်ပြီး၊ မွေးဖူးသည့် မိခင်များသည် ၁၅-၃ဝ မိနစ် ကြာတတ်သည်။ ကလေး ကောင်းနေပါက ထိုထက်မက ကြာလည်း ကိစ္စမရှိ။ နှလုံးခုန်သံ ကောင်း ခြင်း၊ ရေမြွှာရည် ကောင်းခြင်းတို့ဖြင့် ခန့်မှန်းရသည်။
Third Stage တတိယအဆင့်
ကလေးထွက်ပြီးနောက် အချင်းအား ထုတ်ပေးခြင်းအဆင့်။ သားဦးနှင့် မွေးဖူးသူများအကြား အချိန်ကွာခြားခြင်း မရှိ။ ၅-၃ဝ မိနစ်အထိ ကြာ နိုင်သည်။ ကြာလေလေ သွေးထွက် များလေလေ ဖြစ်သည်။ အချင်းချ ပေးနေစဉ် အကူတယောက်က လက်တဖက်ဖြင့် မိခင်၏ ဝမ်းဗိုက် အောက်နား ဆီးစပ်မှ ထိန်းထားလျက် ကျန်လက်တဖက်က သားအိမ်၏ ထိပ်အား အောက်ဆီသို့ ပွတ်ခြေပေးပါ။ ချက်ကြိုးကို ခပ်တင်းတင်း ဆွဲ ထားနေပါ။ အားသုံးပြီး မဆွဲရ။ လိုအပ်လျင် လက်ထည့်၍ ဆွဲထုတ်ရ တတ်သည်။ Manual removal of placenta ခေါ်သည်။ မွေးပြီးလျင် ၁ မိနစ်အတွင်း Oxytocin 10 units IM ပေးပါ။
11. ချက်ကြိုး၊ Umbilical cord နှင့် အချင်း၊ Placenta
ကလေးနှင့် ချက်ကြိုးကတဆင့် သားအိမ်သို့ဆက်နေသော ကြီးမားသည့် အင်္ဂါဖြစ်သည်။ ၉ လက္မကျယ်၍၊ ၁ လက္မထူကာ၊ ၁ ပေါင်လေးသည်။ ချောမွေ့ပြီး၊ ပြာသည့် မျက်နှာပြင်က ကလေးဘက်တွင် ရှိပြီး။ ကြမ်း၍ နီသည့် မျက်နှာပြင်က သားအိမ်ဘက်မှာ ရှိသည်။ ပါးလွှာ သော်လည်း တောင့်တင်းပြီး၊ ထုတ်ချင်းပေါက် မြင်နိုင်သည်။ အတွင်းလွှာ၊ အပြင်လွှာ ရှိသည်။ အရည်သည် ကြည်လင်ပြီး၊ ရေသာသာ အရောင်ရှိသည်။
Umbilical cord ချက်ကြိုး
မွေးဖွားချိန်၌ ချက်ကြိုးသည် ၂ ပေခန့်ရှိသည်။ ၂၅% သည် ၁-၂ ပါတ် ပတ်နေနိုင်သည်။ အသာအယာနှင့် မြန်မြန် လျှော့-ဖြေပေးပါ။ မရပါက (စပန့်ခ်ျ-ဖေါ့ဆက်ပ်) နှစ်ခုကို3cm ခြား ညှပ်ပြီး၊ ချက်ကြိုးကို ဖြတ်ပါ။ ဖြတ်သည်နှင့် ကလေးအတွက် အောက်စီဂျင် မရတော့။ ထိုသို့ ဖြစ်လျင် မွေးပြီးပြီးချင်း အသက်ရှူ ကူပေးခြင်း လုပ်ပေးရမည်။ ကလေး ငိုမှသာ ချက်ကြိုးဖြတ်တာ ကောင်းသည်။
ချက်ကြိုးတွင် သွေးလွှတ်ကြော ၂ ခုနှင့် သွေးပြန်ကြော ၁ ခုတို့ ပါဝင် သည်။ ၎င်းသွေးကြောများမှတဆင့် ကလေးသည် မိခင်ထံမှအာဟာရကို ရပြီး၊ အညစ်အကြေး စွန့်ပြစ်သည်။ ချက်ကြိုးသည် ဖြတ်ပြီးသည့်နောက် ၅-၁၅ မိနစ်ကြာ ခုန်နေနိုင်သည်။ ကလေး၏ ချက်မှ ချက်ကြိုး မဖြတ်မီ ချက်ကြိုးထဲက သွေးများ ကလေးဆီ ရောက်အောင်ဆွဲသွင်းပြီးမှ ဖြတ်ပါ။ ကြီးလာလျင် ချက်ကြိုးသည် ဗိုက်အတွင်း အရွတ်အဖြစ် အသုံးမကျ သည့်အရာ ဖြစ်သွားသည်။
ကပ်ကြေး၊ ညှပ် အားလုံးသည် ပိုးသန့်ပြီး ဖြစ်ရမည်။ အရက်ပြန်၊ Iodine အိုင်အိုဒင်း ၁-၂% ထည့်ပေးရည်။ ခြောက်အောင်ထားလျင် ချက်မြန်မြန် ကြွေမည်။ ၁-၃ ပါတ်အတွင်း ချက်ကြွေမည်။ ချက်မကြွေမချင်း ကလေး ကို ရေပတ်တိုက်ပေးခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အချင်းထွက်ပြီးပါက Ergometrine IM ထိုးပေးလျင် ၆-၇ မိနစ် အတွင်း သက်ရောက်သည်။ Oxytocin 10 Units IM ထိုးပါက ၂့၅ မိနစ်အတွင်း သက်ရောက်သည်။ မွေးဖွားပြီး သွေးသွန်ခြင်းကို ကာကွယ်သည်။
A နှင့် B တွင် သားအိမ်သည် မပွင့်သေး၊
C တွင် သားအိမ်နှုတ်ခမ်းသည် ၆ဝ% ပါးလာပြီး၊ သားအိမ်အဝသည် ၁-၂ စင်တီမီတာ ပွင့်လာပြီ၊ Effacement ဟုခေါ်သည်။
D တွင် ၉ဝ% ပါးလာပြီး၊ ၄-၅ စင်တီမီတာ ပွင့်လာပြီ။
သားအိမ်နှုတ်ခမ်းပါးခြင်း နှင့် သားအိမ်အဝ ပွင့်ခြင်း နှစ်မျိုးလုံးကို စမ်းသပ်ရမည်။
မွေးဖွားနေစဉ် ကလေး၏ ခန္ဓာကိုယ်အနေအထား ပြောင်းလဲပုံ အဆင့်ဆင့်
၁) Floating head ကလေးခေါင်း မဝင်သေးသည့်အဆင့်။ ခေါင်းအား မိခင်၏ ဆီးစပ်နေရာတွင် လှုပ်ကြည့်၍ ရသေးသည်။ မွေးလမ်းထဲ ဆင်း မလာသေး။ (ပုံအသေး) ကလေး၏ ဦးခေါင်းခွံ အရိုးဆက်များ သည် မိခင်၏ မွေးလမ်းအဝတွင် ၄၅ ဒီဂရီခန့် စောင်းနေသည်။
၂) Descent and Engagement အောက်သို့ဆင်းခြင်း၊ ကလေး ဦးခေါင်းသည် သားအိမ်အဝတွင် ကျကျနန လာရောက် ထိစပ်လာ သည်။ မွေးနေစဉ် တလျှောက်လုံး မိခင်သားအိမ် ကြွက်သားများ၏ ညှစ်အားကြောင့် ကလေးသည် အောက်ဖက်သို့ ဆင်းဆင်းလာသည်။ ကလေးသည် မေးနှင့် ရင်ပတ် ထိနေအောင် လည်ပင်းကို ငိုက်၊ ခေါင်း ကွေးလျက် ကျယ်နေသော သားအိမ်အဝထဲသို့ ဝင်လာတော့မည်။ (ပုံအသေး) ဦးခေါင်းခွံအရိုး ဆက်များသည် မိခင်၏ မွေးလမ်းအဝတွင် ၄၅ ဒီဂရီခန့် စောင်းနေဆဲ ဖြစ်သည်။
၃) Flexion ဦးခေါင်းငိုက်၍ကွေးခြင်း၊ သားအိမ်၏အပေါ်ထိပ်ပိုင်းက အောက်သို့ ဖိပေးနေစဉ် မပွင့်သေးသော သားအိမ်အဝ၏ ခုခံနေမှု ကြောင့် ကလေး၏ ဦးခေါင်းသည် အတတ်နိုင်ဆုံး ကွေးလာသည်။ ခေါင်း မွေးလမ်းထဲ ဆင်းလာသည်။ အနည်းငယ် လည်လာသည်။ ကလေး၏ ငယ်ထိပ်သည် မိခင်၏ မွေးလမ်းအဝတွင် ရှေ့-နောက် ဖြစ် လာတော့မည်။ (ပုံအသေး) နောက်စေ့သည် ရှေ့ဖက်ဆီ လှည့်လာ တော့မည်။
၄) Internal rotation အထဲတွင်လှည့်ခြင်း၊ ကလေးအား အောက်သို့ တွန်းပို့ပေးနေစဉ် ဦးခေါင်းသည် မိခင်၏တင်ပဆုံတွင်း အခင်းအကျင်း များအရ လည်လာစေသည်။ ၎င်းအောက်ခံမျက်နှာပြင်မှာ ပုခက်ကဲ့သို့ ရှိသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ကလေး၏လည်ပင်း လည်သွားရပြီး၊ ဦးခေါင်းသည် ၎င်း၏ပခုံးနှင့် တသားတည်း မရှိတော့ချေ။ ကလေး၏ မျက်နှာသည် မိခင်၏ နောက်တည့်တည့် မျက်နှာမူ ဖြစ်လာမည်။ ကလေးခေါင်းလည်သဖြင့် ကလေး၏ငယ်ထိပ်သည် မိခင်၏ ဆီးစပ်ရိုး အောက်မှာ ရောက်လာသည်။
၅) Extension of the head ဦးခေါင်းအားဆန့်ထုတ်ခြင်း၊
ကလေး၏ ဦးခေါင်းသည် မိခင်၏ ဆီးစပ်ရိုးအောက်မှ ဆန့်ထွက်လာ ကာ ခေါင်းမော့လျက် မွေးဖွါးလာသည်။ (ပုံအသေး) နောက်စေ့သည် မိခင်၏ ဆီးစပ်ရိုးတည့်တည့် ဖြစ်လာသည်။
၆) Restitution ဦးခေါင်းအား ကိုယ်နှင့် အလိုက်သင့်ရန်လည်ခြင်း၊ ခေါင်းမွေးဖွါးလာပြီး၊ အထဲရှိစဉ်က ကလေး ဦးခေါင်းသည် ထွက်ခါနီး၌ အနည်းငယ် ဘေးသို့ လှည့်ခဲ့ရသည်ကို ပြန်ပြင်လိုက်သည်။ ထိုအခါ ဦးခေါင်းနှင့် ပခုံးတို့ တသားတည်း ပြန်ဖြစ်လာသည်။ (ပုံအသေး) ၄၅ ဒီဂရီ ပြန် လည်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။
၇) Internal rotation of the shoulders အထဲ၌ ပခုံးလည်ခြင်း၊ ကလေးဦးခေါင်း ထွက်ပြီးချိန် အထဲတွင် ကျန်နေသေးသည့် ပခုံးသည် ဦးခေါင်း ထွက်ခါနီးကကဲ့သို့ အတွင်းလှည့်ခြင်း ဖြစ်လာသည်။ ထို့ ကြောင့် ပခုံးတဖက်က အခြား တဖက်ထက် ရှေ့ရောက်လာသည်။ ဖခုံးတဖက်သည် မိခင်၏ ဆီးစပ်ရိုး အောက်၌၎င်း၊ အခြားတဖက်က မိခင်၏ မီးညှောင့်ရိုးဖက်၌၎င်း ရှိလာသည်။ ထို့ကြောင့် ထွက်ပြီးသား ကလေး၏ ဦးခေါင်းသည် မိခင်၏ ပေါင်တဖက်ဖက်သို့ မျက်နှာမူသွား သည်။ ရှေ့ပခုံး မွေးလာပြီ။
၈) Lateral flexion ဘေးသို့ကွေးခြင်း၊ ရှေ့ပခုံးက စထွက်သည်။ နောက်ပခုံးလည်း အလားတူ လိုက်ထွက်လာသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်သည် ကလေး၏ ခန္ဓာကိုယ်သည် ဘေးတဖက်သို့ ကွေး၍ဖြစ်ရသည်။ ကျန် ကိုယ်နှင့် ခြေထောက်များ ဆက်၍ အလွယ်တကူ မွေးလာမည်။
13. မွေးဖွားခြင်း အကျဉ်းချုပ် Summary of labor
• ခန့်မှန်းမွေးမည့်ရက် EDD ၏ ရှေ့ ၁ ပါတ်၊ နောက်တပါတ်အတွင်း မွေးမည်။
• First Para (Primigravida) သားဦးသည် ၁၂-၂၄ နာရီ ကြာတတ်ပြီး၊ မွေးဖူးသူများ ၆-၁၂ နာရီကြာတတ်သည်။
• ပိုးသန့်ပြီးသော ပစ္စည်း ကရိယာများ အဆင်သင့် လုပ်ထားပါ။ ချက်ကြိုး ညှပ်ရန် (ဖေါ့ဆက်ပ်) ၂ ချောင်း၊ ကပ်ကြေး၊ ချက်ကြိုးညှပ်ကလစ်၊ ချွဲစုတ်စက်၊ အိုင်အိုဒင်း ၂% ဆေးရည်၊ ဝါဂွမ်း၊ မွေးလမ်းကြောင်းချဲ့မွေးပေးရန် ပစ္စည်များ၊ ထုံဆေး၊ ဆေးထိုးအပ်၊ ချုပ်ကြိုးများ၊ (ဒက်တော) ဆေးရည်၊ ကလေးမွေး (ဖေါ့ဆက်ပ်)၊ ရေနွေး၊ ဆီးခြူပိုက်၊ ကျောက်ကပ်ပုံခွက်၊ ကလေးအနှီး။
• ဗိုက်နာခြင်းသည် အစပိုင်းက နာချိန်တို၍ နားချိန်ကြာမည်။ ထို့နောက် နားချိန်တို၍ နာချိန် ပိုကြာလာရမည်။ ယင်းဖြစ်စဉ်အား မှတ်သားနေရမည်။
• ဗိုက်တကယ် နာ-မနာကို မိခင်၏ဝမ်းဗိုက်ပေါ် ဆရာမ၏ လက်ဝါး တင်ထားကာ သားအိမ်တင်းလာမှ သားအိမ် ညှစ်သည်ဟု မှတ်ပါ။ အနာခံစားမှု လူတယောက်နှင့် တယောက် မတူပါ။
• အဆင့်တိုင်း၌ မွေးလမ်းကြောင်းကို မကြာမကြာ စမ်းသပ်နေရမည်။ သို့သော် သွေးဆင်းပါက မစမ်းပါနှင့်။ APH အချင်းရှေ့ရောက်ဖြစ်ပါက သွေးပိုထွက်စေမည်။
• အဆင့်တိုင်း၌ မိခင်နှင့် ကလေးတို့၏ နှလုံးခုန်သည်ကို မပြတ်စစ်ဆေးပါ။ နှေးခြင်း-မြန်ခြင်းသည် မကောင်း။
• မိခင်၏ သွေးဖိအားကိုလည်း စစ်ဆေးနေပါ။ မွေးနေစဉ် သွေးကြောထဲ ဆေးသွင်းထားပေးနိုင်သည်။ ရေဓါတ်၊ ဆားဓါတ် ဖြည့်ရန်နှင့် အကြောဆေး သွင်းပေးနိုင်သည်။ အစာ မစားစေပါက အန်ခြင်းကို သက်သာမည်။ သို့သော် အက်စစ်ပျယ်ဆေးပေးရမည်။
• မမွေးမီ သွေးအနည်းငယ်နှင့် အကျိအချွဲရော၍ ဆင်းသည်ကို Show (ရှိုး)ဟု ခေါ်သည်။
• ကလေး ထွက်ခါနီးလျင် ရေမြွှာပေါက်မည်။ တချို့က ရေမြွှာစော၍ ပေါက်ပြီး။ အချို့က ရေမြွှာပေါက်သည်နှင့် ကလေးထွက်မည်။
• ရေမြွှာပေါက်ပြီး၊ မမွေးသေးပါက အမြန်မွေးစေသည့် နည်းလမ်းများ သုံးရမည်။ Oxytocin (Syntocinon) drip သွင်းပေးရသည်။ Antibiotic ဆေးပေးရမည်။
• ရေမြွှာရေကို ကြည့်ပါ။ ကြည်လင်နေရမည်။ မကောင်းသည့် အနံ့မရှိရ။ အရောင်စိမ်း၊ ညစ်ပြီးအနံ့မကောင်းပါက ကလေး နစ်မွန်းနေသည်ဟု မှတ်ပါ။ အထဲတွင် ကလေးဝမ်းသွားခြင်း (Meconium) ကြောင့် ဖြစ်သည်။
• ကလေး ထွက်လျင် ထွက်ချင်း ချွဲစုတ်ပေးခြင်း၊ လေမှုတ်ပေးခြင်း၊ အောက်စီဂျင်ပေးရန် လိုနိုင်သည်။
• ကလေးမွေးကာနီး မိခင်လောင်းအား ပေးသင့်သည့် ဖျော်ရည်။ Labourade recipe = ပျားရည် ၁/၄ ခွက်၊ ဆား ၁/၂ ဇွန်း။ သံပုရာရည် ၁/၃ ခွက်၊ (ကယ်လ်စီယံ)နှင့် (မဂ္ဂနီဆီယန်) ၁ ပြားစီ။ ရေအေး ၁ လီတာ။
• အချိန်လွန်သော်လည်း မမွေးသေးခြင်း၊ ၄၁-၄၃ ပါတ်အထိ မမွေးသေးပါက နောက်ကျသည်။ ပြဿနာမကြီးပါ။ ကလေး ကောင်း-မကောင်း ကြည့်ပါ။ လိုအပ်လျင် မွေးအောင်လုပ်ပေးပါ။
• ဒုတိယအဆင့်၌ ကလေးခေါင်းသည် အချိန် တော်တော်ကြာမှ ထွက်လျင် ဦးခေါင်း၏ ဦးရေခွံ Scalp သည် ရောင်လာသောကြောင့် Caput succedaneum ခေါ် ဗောင်းထုပ်ကဲ့သို့ ဖေါင်းလျက် မွေးလာမည်။ ၁ ပါတ် အတွင်း အလိုအလို လျှော့သွားမည်။
14. Episiotomy မွေးလမ်းကြောင်းချဲ့မွေးပေးခြင်း
သားဦးတွင် လုပ်ပေးရတတ်သည်။ ထွက်လာတော့မည့် ကလေး ဦးခေါင်းသည် မိခင်၏ မွေးလမ်းအဝနှင့် တင်းကြပ် နေသည်ဟု စမ်းသပ်တွေ့ရှိပါက လုပ်ပေးရမည်။ သားအိမ်အဝ လုံးဝပွင့်၍ ကလေး၏ ဦးခေါင်း ထွက်ခါနီးမှ လုပ်ပေးရမည်။ ပိုးသန့်ဆေးများ လိမ်းပြီးနောက် ထုံဆေး ထိုးပေးပြီး၊ မွေးလမ်း အဝ၏ အောက်ပိုင်း အလယ်နေရာမှနေ၌ ဘေးတဖက်သို့ ၄၅ ဒီဂရီ စောင်းကာ ၂ လက္မခန့် ကပ်ကြေးဖြင့် ကိုက်ပေးရသည်။ (၁) အတွင်းဆုံးက မွေးလမ်းကြောင်း အရေပြား၊ (၂) အထဲက ကြွက်သားနှင့် (၃) အပြင်အရေပြား၊ သုံးမျိုးတို့ ပါဝင်သည်။
ပြန်ချုပ်လျင်လည်း ယင်းအလွှာ သုံးမျိုးကို အစီအစဉ်အတိုင်း (၁) မွေးလမ်းကြောင်း အရေပြားအား Catgut 3/0 ဖြင့်၎င်း၊ (၂) အထဲက ကြွက်သားအား Catgut 2/0 ဖြင့်၎င်း၊ (၃) အပြင် အရေပြားအား အပ်ချည် သို့မဟုတ် ပိုးကြိုး သို့မဟုတ် နိုင်လွန်ကြိုးဖြင့်၎င်း ချုပ်ပေးရသည်။ အချင်းထွက်ပြီးလျင် ပြီးချင်း ချုပ်ပေးရသည်။ ချုပ်ရိုးကို (အင်တီ-ဆက်ပတစ်) ဆေး ရည်ဖြင့် နေ့စဉ်နှင့် ဝမ်းသွား-ဆီးသွားပြီးတိုင်း ဆေးပေးရမည်။ အနာမရင်းစေရန် ပဋိဇီဝဆေးပေးရမည်။ အနာ သက်သာ စေရန် ဆေးလည်း ပေးရမည်။ ၅-၇ ရက်ကြာလျင် အပြင်ဆုံး အရေပြားချုပ်သည့် ချုပ်ရိုးကို ဖြေပေးရမည်။
Perineal Tear and Repair မွေးဖွားပြီး စုတ်ပြဲခြင်းကို ချုပ်ပေးခြင်း
မွေးပေးစဉ် အဆင်မသင့်ပါက မွေးလမ်းအဝ စုတ်ပြဲသွားတတ်သည်။ မွေးလမ်းကြောင်းအောက် အလယ်နေရာမှ စအို ဆီသို့ စုပ်ပြဲသွားတတ်သည်။
1. အဆင့်(၁) မွေးလမ်းကြောင်းအရေပြားစုတ်ခြင်း၊
2. အဆင့်(၂) မွေးလမ်းကြောင်းအရေပြားနှင့် ကြွက်သားစုတ်ခြင်း၊
3. အဆင့်(၃) မွေးလမ်းကြောင်းအရေပြား။ ကြွက်သားနှင့် စအိုထိန်း Anal sphincter စုတ်ခြင်း၊
4. အဆင့်(၄) မွေးလမ်းကြောင်းအရေပြား။ ကြွက်သား၊ စအိုထိန်း နှင့် အစာဟောင်းအိမ်အကာ Rectum စုတ်ခြင်း၊
Episiotomy ချုပ်နည်းအတိုင်း ချုပ်ပေးရသည်။ အနာကျက်သည်အထိ ဝမ်းချုပ်စေရန် လုပ်ပေးသင့်သည်။
1. မွေးလမ်းကြောင်းအရေပြားအား ဆက်တိုက်နည်းဖြင့် ချုပ်ပေးခြင်း၊ Catgut 3-0 continuous suture
2. ကြွက်သားအား တချောင်းခြင်းနည်းဖြင့် ချုပ်ပေးခြင်း၊ Catgut 2-0 Interrupted suture
3. အစာဟောင်းအိမ် စုတ်ခြင်းအား တချောင်းခြင်းနည်းဖြင့် ချုပ်ပေးခြင်း၊ Catgut 2-0 Interrupted suture
4. စအိုအား ထိန်းသည့်ကြွက်သားဝိုင်းအား တချောင်းခြင်းနည်းဖြင့် ချုပ်ပေးခြင်း Catgut0Interrupted suture
5. အရေပြားအား တချောင်းခြင်းနည်းဖြင့် ချုပ်ပေးခြင်း၊ Thread or Silk Interrupted suture
15. အချင်းအား လက်ဖြင့်ထုတ်ပေးရခြင်း၊ Manual removal of placenta
အချင်းသည် တော်တော်နှင့် မကျပါက လက်ဖြင့် ထုတ်ယူရမည်။ လက်တဖက်က ချက်ကြိုးတလျှောက်မှနေ၍ မွေးလမ်း ကြောင်းထဲ၊ ထို့နောက် သားအိမ်ထဲ သွင်းပါ။ ကျန်လက်တဖက်က ဗိုက်အပေါ်မှနေ၍ သားအိမ်၏ ထိပ်ပိုင်းအား ထိန်းထား လျက်၊ အထဲလက်က အချင်းကို ဖြေးဖြေးချင်း ဆွဲထုတ်ရသည်။ အချင်းကိုလည်း ခွါယူရတတ်သည်။ လိုအပ်လျင် မေ့ဆေး၊ အိပ်ဆေးပေးရသည်။ အချင်းချနေစဉ် ချက်ကြိုးပြတ်သွားပါကလည်း ဤနည်းအတိုင်း လုပ်ပေးရသည်။ အချင်းအပိုင်းအစ ကျန်နေပါက သွေးဆင်းများမည်။ အချင်းထွက်ပြီးပါက Oxytocin 10 ထိုးပေးပါ။ BP, Pulse စစ်ဆေးပါ။ လိုအပ်လျင် သွေး၊ 5D, RL သွင်းပေးရမည်။
16. မွေးဖွားပြီးနောက်စောင့်ရှောက်ပေးခြင်း Postdelivery (postpartum) period (PN Care)
မွေးပြီး ၆-၈ ပါတ်ကာလကို ခေါ်သည်။ ဆီးအိမ်၊ ကျောက်ကပ်၊ ရင်သားရောင်ခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်သည်။ နို့ရောင်ခြင်း၊ နို့နာဖြစ်ခြင်း၊ အနေအထိုင်ခက်ခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ လိပ်ခေါင်းဖြစ်ခြင်း၊ ရုပ်ပိုင်းအပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ခြင်း။
PPH ခေါ် မွေးပြီးသွေးသွန်ခြင်း၊ ၅-၁၅% ဖြစ်တတ်သည်။ သာမန်အားဖြင့် ပြဿနာမရှိ။ အချင်းအစအန ကျန်ခြင်း၊ သားအိမ်ညှစ်အား မမှန်ဖြစ်ခြင်း၊ သွေးမတိတ်ရောဂါရှိနေခြင်း၊ ထိခိုက်မိခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ရသည်။ သွေးအဆင်းများပါက (ရှော့ခ်) ရနိုင်သည်။ Oxytocin ဆေးသုံးရမည်။ အချင်းချလျင် ဂရုစိုက်ရမည်။ လိုအပ်လျင် လက်ဖြင့် ထုတ်ပေးရမည်။ အချင်းကို စစ်ဆေးရမည်။ ချက်ကြိုးကို စောစီးစွာဖြတ်ရမည်။ သွေးသွင်းရန်လိုနိုင်သည်။ နောက်ဆုံး ခွဲစိတ်လျက် သားအိမ် သွား သွေးလွှတ်ကြောကို ချည်ပေးရတတ်သည်။
Lochia (လောခီရာ) မွေးဖွားပြီး အရည်ဆင်းခြင်း အရောင်နီသည်။ ၂-၃ ရက်နောက် ပန်းရောင်ဖြစ်လာသည်။ ၁ဝ ရက် နောက်ပိုင်း အဖြူရောင်။ အဝါရောင်ဖြစ်လာသည်။ နည်းနည်းလာမည်။ ၇-၁ဝ ရက်ထက်မပို။
ရာသီ ပြန်ဆင်းခြင်း ၇-၉ ပါတ်နေလျင် ရာသီပြန်ဆင်းမည်။ အစတွင် ရက်တို၍ နည်းမည်။ နောက်ပုံမှန် ဖြစ်မည်။ နို့တိုက်နေလျင် ကြာမှ ဆင်းနိုင်သည်။ ဆက်တိုက် ကိုယ်ဝန်ရှိသွားတတ်သေးသည်။
သတိပေးချက်များ အပူချိန် ၁ဝ၄။ ပျို့-အန်ခြင်း၊ ဆီးပူဆီးအောင့်ခြင်း၊ သွေးဆင်းများလွန်းခြင်း၊ ရင်ဘတ်နာခြင်း ချောင်း ဆိုးခြင်း၊ နို့နာ၍ ရောင်ခြင်း၊ မီးဖွားရာနေရာပတ်ဝန်းကျင်က အလွန်နာခြင်း။
• Fetal Distress ဗိုက်ထဲကကလေး ဒုက္ခရောက်ခြင်း အောက်စီဂျင်မဝခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ကလေးနှလုံးခုန်နှုန်း ပြောင်းမည်။ ရေမြွှာရေ နောက်မည်။ ရက်နောက်ကျ မွေးလျင်လည်း ဖြစ်တတ်သည်။ ကလေးမြန်မြန်မွေးအောင် လုပ်ပေးရမည်။
• Breathing Problems အသက်မရှူသည့်ပြဿနာ။ ချွဲစုပ်ခြင်း လေမှုတ်သွင်းပေးခြင်း၊ အဆုပ်ကိုဖိပေးခြင်း၊ အောက်စီဂျင်ပေးခြင်းတို့ လုပ်ပေးရမည်။
• Prolapsed Umbilical Cord မမွေးမီ ချက်ကြိုးကြွံထွက်လာခြင်း၊ ၁ဝဝဝ လျင် ၁ ယောက်ဖြစ်တတ်သည်။ ကလေးဆီ သွေးမလျှောက်ဖြစ်တတ်သည်။ ကြိုးစားမရက ခွဲမွေးရတတ်သည်။
• Nuchal Cord ချက်ကြိုး လည်ပင်းပတ်နေခြင်း၊ ပြဿနာ မကြီးတတ်ပါ။
• Shoulder dystocia ခေါ် ကလေးပခုံး မမွေးနိုင်ခြင်း။ သားဖွါး-မီးယပ်ဆရာဝန်၊ မေ့ဆေးဆရာဝန်၊ ကလေး ဆရာဝန်များ အကူအညီတောင်းပါ။ မိခင်ကို ပေါင်ရင်းအား သူမ၏ ဗိုက်ဆီသို့ ဦးတည်လျက် အတတ်နိုင်ဆုံး အကွေးခိုင်းပါ။ ဆီးစပ်နေရာကို အောက်သို့ ဖိပေးပါ။ ကလေး၏ရှေ့ပခုံးကို ဖိချပေးပါ။ ကလေး၏ပခုံးအား အလိုက်သင့်ရွေ့ပေးပါ။ တခါတရံ နောက်ပခုံးကို အရင်မွေးယူရတတ်သည်။ တခါတရံ မိခင်အား လေးဘက် ထောက်အနေအထားဖြင့် မွေးယူရတတ်သည်။ နောက်ဆုံးမရလျင် ကလေးခေါင်းအား အထဲပြန်ထည့်သွင်းပြီး ဗိုက်ခွဲမွေးပေးရတတ်သည်။ တခါတရံ ကလေး၏ ညှပ်ရိုးကို ချိုးပေးပြီး မွေးယူရတတ်သည်။ တခါတရံ မိခင်၏ ဆီးစပ်ရိုးအဆက်ကို ဖြတ်ပေးပြီး အထွက်ချောင်စေကာ မွေးပေးရတတ်သည်။
• Risk Factors During Pregnancy ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် တွေ့နိုင်သော အန္တရာယ်များ၊ အသက် ၁၅ နှစ်အောက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်လျင် PET ဖြစ်နိုင်ခြေများ၊ အလေးချိန် မပြည့်သည့်ကလေးမွေးနိုင်။ အသက် ၃၅ နှစ်အထက် ဖြစ်လျင် သွေးဖိအားများတတ်၊ ဆီးချိုဖြစ်တတ်သည်။ ပြဿနာများတတ်သည်။ ပေါင်ချိန် ၁ဝဝ အောက်မိခင် ဖြစ်ပါက ကလေးပေါင်ချိန် နည်းတတ်သည်။ ဝလွန်းသည့် မိခင်၏ ကလေးလည်း ဝတတ်သည်။ PET ဖြစ်နိုင်ခြေ များသည်။ မိခင်၏အရပ် ၅ ပေထက်နိမ့်ပါက CPD အရိုးကွင်းကျဉ်း ဖြစ်နိုင်သည်။
• Problems inaPrevious Pregnancy ယခင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်က ပြဿနာများ ယခင် ကလေးမွေးစဉ်က ပြဿနာ ရှိလျင် နောက်ကိုယ်ဝန်များလည်း ခက်တတ်။ ဆီးချိုရှိသည့်မိခင်မှ ဝလွန်းသောကလေးမွေးတတ်။ RH မတည့်က ကလေးကို သွေးလဲပေးရမည်။ ကလေးအမွေးများက သားအိမ်ညှစ်အား လျှော့တတ်သည်။
• Disorders Present Before Pregnancy ကိုယ်ဝန်မဆောင်မီ ရှိနေသော ပြဿနာများ နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုး ရောဂါ၊ သွေးအားနည်းရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အတက်ရောဂါ၊ လိင်မှတဆင့်ကူးစက်ရောဂါ၊ ဆီးချိုးရောဂါ၊ အသဲ၊ သည်းခြေလမ်းရောဂါ၊ ပန်းနာ၊ မတည့်သည့်ရောဂါ၊ လေးဘက်နာရောဂါ၊ သားအိမ်အလုံး၊ ကင်ဆာ၊ စသည်ရှိလျင် အထူးဂရုစိုက် မွေးပေးရမည်။
18. မွေးကခါစကလေး Newborn baby
မွေးကခါစကလေး၏ အလိုလိုတုံ့ပြန်မှု ၃ မျိုး
၁) အသံ ပြင်းပြင်းပေးပါက လက်-ခြေများ ဆန့်ထုတ်တတ်သည်။ (မောရိုး-ရီဖလက်စ်) ဟုခေါ်သည်။
၂) ပါးတဖက်ကို ထိပေးပါက ၎င်းဖက်သို့ ခေါင်းလှည့်လာသည်။
၃) ပါးစပ်ထဲ တခုခုထည့်က စုပ်တတ်သည်။
Apgar scoring system (အက်ပ်ဂါ စကိုး) အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် ကလေး၏ အခြေအနေအား အကဲဖြတ်ခြင်း
လက္ခဏာ ဝ မှတ် ၁ မှတ် ၂ မှတ်
အရောင် ပြာဖြော့ ကိုယ်ပန်းရောင်၊ ခြေ-လက်ပြာ ပန်းရောင်
အသက်ရှူခြင်း မရှိ နှေးနှေးရှူ၊ ၁ မိနစ် ၄ဝ အောက်ရှူ အသံကျယ်ငို၊ ၁ မိနစ် ၄ဝ ရှူ
နှလုံးခုန်ခြင်း မရှိ ၁ မိနစ် ၁ဝဝ အောက်ခုန် ၁ မိနစ် ၁ဝဝ ခုန်
ကြွက်သား ပြော့ ခြေထောက်သာလှုပ် ကောင်းစွာလှုပ်ရှား
ထိတွေ့မှုအားတုံ့ပြန်ခြင်း မရှိ နည်းနည်းရှိ ကောင်းစွာတုံ့ပြန်
၈-၁ဝ မှတ် ကောင်းသည်။ ၅-၇ မှတ် သင့်သည်။ ၃-၄ မှတ် ညံ့သည်။ ဝ-၂ မှတ် ဆိုးသည်။
ကလေးအား မွေးလမ်းကြောင်းမှ မွေးလာနိုင်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပါက၊
1. မွေးချိန်ထက်စော၍ မွေးပေးလလျင် Oxytocin/Syntocinon (Pitocin) 10 Units in drip သွင်းပေးရသည်။
2. ကလေးအမွေးများသူများ၊ ညှစ်အားနည်းသူမျာအားလည်း ပေးနိုင်သည်။
3. Artificial (Early) rupture of membranes (ARM) ရေမြွှာကို စော၍ ဖေါက်ပေးခြင်း။
4. ကလေးဦးခေါင်းအား Forceps delivery ညှပ်ဆွဲ မွေးပေးခြင်း၊
5. Vaccum extraction လေစုပ်စက်ဖြင့် ဆွဲပေးခြင်း။
ကလေးသည် မွေးဖွားသည့် လမ်းကြောင်း၌ ခေါင်း မဟုတ်ဘဲ၊ တင်ပါးဆုံနှင့် ရှိနေခြင်းကို ခေါ်သည်။ ၃-၄% သော ကိုယ်ဝန်သည် တင်ပါးဆုံနှင့် ရှိသည်။ ဂရုတစိုက် မွေးယူ၍ရသည်။ သို့သော် ကလေးနှင့် ချက်ကြိုးတို့အား ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရတတ်သည်။ ကိုယ်ဝန်နုစဉ် တင်ပါးဆုံ ပြုသော်လည်း နောက်တွင် ခေါင်းသို့ လှည့်လာတတ်သည်။ ၇ဝ% သည် ပေါင်ကွေး၊ ဒူးဆန့်နေသည်။ ၁ဝ% က ပေါင်ရော ဒူးပါကွေးနေသည်။ ၂ဝ% က ပေါင်တဖက် သို့မဟုတ် ၂ ဖက်လုံး ဆန့်နေသည်။ ခြေတဖက် ထွက်ခြင်း ဖြစ်ပါက ခွဲမွေးရမည်။ လမစေ့ ကလေး အသက်ရှင်ရန်လမ်း မရှိက မွေးလမ်းမှပင် မွေးပေးနိုင်သည်။
Breech အား ဝမ်းဗိုက်အပြင်ဖက်မှလှည့်ပေးခြင်း External cephalic version
တင်ပါးဆုံပြုနေခြင်းအား ကိုယ်ဝန်ရှိနေစဉ် ခေါင်းပြုစေရန် လှည့်ပေးနိုင်သည်။
သို့သော် မွေးလမ်းကြောင်းက သွေးယိုနေသူ၊ အချင်းက သားအိမ်ဝ ရောက်နေ သူ၊ ကလေးသေးလွန်းသူ၊ ရေမြွှာရေ နည်းလွန်းသူ၊ ကလေးနှလုံးခုန် မမှန်သူ၊ ရေမြွှာ စောပေါက်ထားသူ၊ အမွှာကိုယ်ဝန်များကို လုပ်ပေး၍မရ။
မွေးမည့်ရက်နှင့် နီးနေသူ၊ ရေမြွှာရေ လုံလောက်သူ၊ ကလေး အလေးချိန် မနည်းသူ၊ ကလေး အမွေးများသူ၊ အချင်းပုံမှန် ဖြစ်သူများအား လုပ်ပေးပါက အောင်မြင်မည်။ ၆၅% အောင်မြင်သည်။
Breech အား ဝမ်းဗိုက်အပြင်ဖက်မှ လှည့်ပေးခြင်း၏ အန္တရာယ်များ
ကလေးစောမွေးခြင်း၊ ရေမြွှာစောပေါက်ခြင်း၊ သွေးထွက်ခြင်း (ကလေး၊ မိခင်)၊ ကလေးဒုက္ခရောက်ခြင်း၊ ပြင်ပေးပြီးမှ ပြန်ဖြစ်ခြင်း။
Breech ကိုယ်ဝန် အောက်ပိုင်း မွေးပေးခြင်း
သားအိမ်အဝ လုံးဝပွင့်ပြီး၊ ကလေး၏ တင်ပါးသည် မွေးလမ်းထဲ ဆင်းလာသည် နှင့် မိခင်အား ဗိုက်နာလျင် ညှစ်ရန်ပြောပါ။ လိုအပ်ပါက မွေးလမ်းကြောင်း အဝအား ချဲ့ပေးပါ။ ကလေး၏ တင်ပါး စမွေးလာမည်။ ခေါင်းမွေး သကဲ့သို့ လည်မည်။ ကလေး၏ တင်ပါးကို ကိုင်ပါ။ ဆွဲမထုတ်ပါနှင့်။ ပဌမ ခြေတဖက် မွေးပေးပါ။ ဒူးဆစ်ကို ကွေးအောင် ပြင်ပေးပါ။ ခြေခြင်းဝတ်အား ကိုင်၍ ဝမ်းဗိုက်ရှေ့မှ မွေးပေးပါ။ နောက် ခြေတဖက်ကိုလည်း မွေးပေးပါ။ ကလေး၏ တင်ပါးကို မိမိ၏ လက်နှစ်ဖက်နှင့် ကိုင်ပါ။ ခါး၏ အောက်ပိုင်းအထိ ထွက်လာ မည်။ ခန္ဓာကိုယ်အား ဖိမကိုင်ပါနှင့် ကျောက်ကပ်၊ အသဲတို့အား ထိခိုက်စေနိုင် သည်။ ထို့နောက် ပခုံးကို မြင်ရမည်။
Breech ကိုယ်ဝန် လက်များမွေးပေးခြင်း
လက်များ အလိုလို ထွက်လာပါစေ။ လိုအပ်ပါက ရင်ဘတ်ရှေ့မှ ထွက်စေရန် ကူညီပေးပါ။ ကလေး၏ ခြေထောက်ကိုကိုင်လျက် မိခင်၏ ဝမ်းဗိုက်ဆီသို့ မြှင့်-နှိမ့်ပေးခြင်းဖြင့် ကလေးလက်များမွေးရန်လွယ်ကူစေသည်။ မိမိ၏ လက်ချောင်း ၁-၂ ချောင်းအား ကလေး၏ တဒေါင်ဆစ် အကွေးပိုင်းထဲ ထည့်၍ ကလေး၏ လက်အား ကွေးထားစေကာ ကလေး၏ မျက်နှာ၏ ရှေ့မှ မွေးထုတ်ပေးရမည်။ နောက်လက် တဖက်ကို ဆက်မွေးပေးပါ။
ကလေးဦးခေါင်းအား မွေးပေးခြင်း၊ Mauriceau Smellie Veit manoeuvre
ဆရာမ၏လက်အား ကလေး၏ ပေါင်နှစ်ဖက်ထဲမှ သွင်း၍ ကလေး၏ ဝမ်းဗိုက်၊ ရင်ဘတ်ရှေ့မှ မတင်ထားပါ။ ကလေး၏ မျက်နှာသည် အောက်ဖက် လှည့်နေ သည်။ ကလေး၏ ပါးစပ်ထဲသို့ မိမိ၏ လက်ညှိုးအားထည့်ပြီး၊ လက်မနှင့် လက် ခလယ်တို့က ကလေး၏ ပါးတဖက်စီဘေးမှာ ထားပါ။ မိမိ၏ ကျန်လက်တဖက် ဖြင့် ကလေး၏ ပခုံးနှစ်ဖက်မှကိုင်ပါ။ ကလေး၏မေးရိုးအား ဆွဲချလျက် ကလေး ၏ ဦးခေါင်းကို ကွေးပါစေ။ ထို့နောက် ကလေးအား အောက်သို့ ဆွဲယူပါ။ နောက် ဆရာမတဦးက မိခင်၏ ဆီးစပ်ရိုး အထက်နားမှ လက်ဖြင့် ဖိခြင်းဖြင့် ကလေး၏ ဦးခေါင်း ကွေးစေအောင် အကူအညီ ပေးနိုင်သည်။
ကလေးဦးခေါင်း မွေးမရသေးလျင် ဆီးခြူပေးပါ။ ကလေး၏ ကိုယ်အား အဝတ်ဖြင့်ပတ်ထားပါ။ လိုအပ်ပါက (ဖေါ့ဆက်ပ်)ဖြင့်မွေးပေးရသည်။ တခါတရံ ကလေး၏ ဦးခေါင်းအား မိခင်၏ဝမ်းဗိုက် ဆီးစပ်အထက်နားမှ ဖိပေးနိုင်သည်။ တင်ပါးဆုံပြု ကလေး မွေးပေးအပြီး ကလေးကို ချွဲစုပ်ပါ။ ချက်ကြိုး ဖြတ်ပါ။ လိုအပ်လျင် CPR လုပ်ပါ။ အောက်စီဂျင် ပေးပါ။
Lovset’s manoeuvre ကလေး၏ လက်များသည် ဆန့်တန်းနေပါက လုပ်ပါ။ ကလေးအား တင်ပါးမှကိုင်၍ ကိုယ်တဝက် လှည့်ပါ။ အောက်ဖက်ဆီသို့ ဆွဲပေးပါ။ နောက်ကျောဖက် ရောက်နေသော ကလေး၏လက်သည် ရှေ့ဖက် ရောက်လာကာ ဆန့်နေသည့် ကလေး၏လက်က ထွက်ရန် လွယ်ကူလာမည်။ မိမိ၏ လက်ချောင်း ၁-၂ ချောင်းက ကလေး၏လက်အား ကလေး၏ ရှေ့မျက်နှာ ဖက်မှနေ၍ အသာအယာ ဆန့်တန်းဆွဲထုတ် ပေးရမည်။ ကျန်လက်ကိုလည်း မွေးထုတ်ပေးပါ။
ကလေးအား လှည့်ပေး၍မရပါက ရှေ့ပခုံး (နောက်ဖက်တွင်ရှိသော ပခုံး) ကို အရင် မွေးပေးပါ။ ကလေးအား ခြေခြင်း ဝတ်နေရာမှ အထက်ကို မြှောက်ကိုင်ပါ။ ကလေး၏ကိုယ်အား မိခင်၏ပေါင်တဖက်ဆီသို့ ဆွဲယူပါ။ ကလေး၏ နောက်ဖက် က ဦးစွာ တွေ့မည့် ပခုံးအားမွေးပေးပါ။ ထို့နောက် ကလေး၏ လက်များကို မွေးထုတ်ပါ။ ထို့နောက် ခြေမျက်စိက ကိုင်၍ ကလေးအား အောက်ဖက်သို့ ချကာ ဒုတိယပခုံးကို မွေးပေးပါ။ ဆက်၍ လက်မွေးပေးပါ။
အလေးချိန်များ၊ ဗိုက်အရွယ်ကြီး၊ ကိုယ်ဝန်ရှိစ လက္ခဏာများ Morning sickness ပိုဖြစ်၊ နှလုံးခုန်သံ ၁ ခုမက ကြားရမည်။ အမျိုးထဲမှာ အမွှာမွေးဖူးသူ ဖြစ်တတ်သည်။ အမွှာ နှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်သည်။
1. Non-identical twins မတူသော မ မျိုးဥ ၂ ခုနှင့် ကျားသုတ်ပိုး ၂ ခုတို့မှ သန္ဓေတည်ခြင်း။
2. Identical twins တူသော မမျိုးဥ ၁ ခုနှင့် ကျားသုတ်ပိုး ၁ ခုတို့မှ သန္ဓေတည်ခြင်း။ ကလေးများ၏ ရုပ်လက္ခဏာ နှင့် စိတ်တို့လည်း တူညီကြသည်။
အလိုအလျှောက်ပျက်ကျခြင်း၊ Spontaneous Abortion (Miscarriage) ကုသပေးရန်မလို။
အပြည့်အစုံပျက်ကျခြင်း၊ Complete Abortion ကုသပေးရန် မလို။
တဝက်တပျက် ပျက်ကျခြင်း၊ Incomplete Abortion D and C လုပ်ပေးရမည်။
ပျက်ကျစဉ် ပိုးဝင်ခြင်း၊ Septic Abortion ပဋိဇီဝဆေးများ ပေးပြီးမှ သားအိမ်ခြစ်ရသည်။ ATT ထိုးပေးရမည်။
ဖျက်ချခြင်း၊ Induced Abortion တမင်တကာ ဖျက်ခြင်း။
သားအိမ်အဝ ချဲ့ခြင်း၊နှင့် သားအိမ် ခြစ်ခြင်း၊ D and C (Dilatation and Curretage) တဝက်တပျက် သားပျက်ခြင်း အတွက် လုပ်ပေးရသည်။ Utrine sound သားအိမ်တိုင်းတံ၊ Sim’s speculum မွေးလမ်းကြောင်းထဲ ကြည့်သည့် ကရိယာ၊ Vulsellum သားအိမ်ဝညှပ်။ Dilator သားအိမ်ဝ ချဲ့တန်၊ Curette ခြစ်တန် စသည့် ကရိယာတို့ကို အသုံးပြုရသည်။ သားအိမ်အဝကို ချဲ့တံဖြင့် ချဲ့ပေးပြီး၊ သားအိမ်ထဲ ရှိသမျှ တစ်ရှူးများ ကုန်စင်အောင် အတွင်းမျက်နှာပြင် အားလုံးကို ခြစ်ထုတ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
အခြားနည်းများ။ Manual Vacuum Aspiration (MVA) စုပ်ထုတ် ပေးနည်း။ ကိုယ်ဝန်နုလျင် Methotrexate or Mifepristone followed by Prostaglandin ဆေးများဖြင့် ဖျက်ချနည်း။ ကိုယ်ဝန်ရင့်လျင် Prostaglandin ဆေးဖြင့် ဖျက် ချနည်း။
23. ဗိုက်ခွဲမွေးပေးခြင်း၊ Caesarean section
(Cesarean section), C-section or Caesar (LSCS)
ဝမ်းဗိုက်အား ခွဲ၍ ကလေးမွေးပေးခြင်းကို ခေါ်သည်။ အများ အားဖြင့် ဗိုက်ခွဲပြီးနောက် သားအိမ်၏ အောက်ပိုင်းကိုခွဲသည်။ Lower Segment Caesarean Section (LSCS) ဟု ခေါ် သည်။ သားအိမ်၏ အပေါ်ပိုင်းအား ခွဲသည်ကို Classical Caesarean Section (CS) ဟုခေါ်သည်။ အရေးပေါ်ကိစ္စများ၊ နောက်ထပ် ကလေးမွေးရန် မလိုတော့ခြင်းတို့အတွက် သုံး သည်။ အကောင်းဆုံးမှာ (LSCS) ဖြစ်သည်။ သားအိမ် ချုပ်ရိုး ပိုခိုင်မာသည်။ သွေးထွက်နည်းသည်။ အများဆုံး ၃ ကြိမ်အထိ ခွဲမွေးနိုင်သည်။ LA ထုံဆေး။ SA ခါးထဲထိုးရသည့် ထုံဆေး။ GA မေ့ဆေး အမျိုးမျိုးသုံးနိုင်သည်။
1) အချိန်လွန် မမွေးနိုင်ခြင်း၊
2) ကလေး ဒုက္ခရောက်ခြင်း၊
3) မိခင် ဒုက္ခရောက်ခြင်း၊
4) ပြင်းထံသော ကိုယ်ဝန်သွေးဆိပ်တက်ခြင်း
8) ကလေးအနေအထား မမှန်ခြင်း၊
11) CPD အရိုးကွင်းနှင့် ကလေးအရွယ်မျှခြင်း၊
12) APH အချင်းနေရာ မမှန်ခြင်း၊
13) APH အချင်းအထဲ၌ကွာခြင်း၊
14) အရိုးကွင်း ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း၊
15) အရင်ကိုယ်ဝန်က ခွဲမွေးခဲ့ရခြင်း၊
16) မွေးလမ်းကြောင်း ဒဏ်ရာမရစေလိုခြင်း၊
24. H mole (Hydatidiform mole)
အချင်းက စပျစ်သီးခိုင်ကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းဖြစ်သည်။ သားအိမ် ၂ ခါ ခြစ်ပေးရသည်။ နောက်ကိုယ်ဝန်ကို ၆ လ ၁ နှစ်ကြာမှ ယူသင့်သည်။ ကလေးမလိုတော့သည့် မိခင်များအား သားအိမ်ထုတ်ပေးသင့်သည်။
25. ကိုယ်ဝန် သွေးဆိပ်တက်ခြင်း Eclampsia or Toxemia နှင့်
ကိုယ်ဝန် သွေးဆိပ် တက်ခြင်း (မတက်မီအဆင့်) Pre-eclampsia (PET)
ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ် (၁) သွေးဖိအားတက်ခြင်း၊ High Blood Pressure (၂) ဆီးထဲ၌ (ပရိုတင်း) ပါနေခြင်း Urine Albumin နှင့် (၃) ကိုယ်ရောင်ခြင်း Oedema လက္ခဏာများရှိခြင်းကို ခေါ်သည်။ တခါတရံ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ပေးရသည်အထိ ဆိုးတတ် သည်။ မွေးပြီး ၆ ပါတ်အထိလည်း ဖြစ်တတ်သည်။ သားဦးကိုယ်ဝန်တို့ ၅-၇% ဖြစ်တတ်သည်။ တတိယ ၃ လပိုင်းတွင် ပိုဖြစ် တတ်သည်။ ကိုယ်အလေးချိန် များသည်။ ဗိုက်နာမည်။ ခေါင်းကိုက်မည်။ ဆီးနည်းမည်။ ခေါင်းမူးမည်။ အန်မည်။
ကုသရန်။ ဆေးခန်းကို မှန်မှန်လာပြစေပါ။ Urine Albumin ဆီး၊ BP သွေးဖိအား စစ်ပါ။ ကလေးမွေးလျင် ပြန်ကောင်း သည်။ သွေးကျဆေး ပေးရန်လိုတတ်သည်။ ဆား လျှော့စားရန်ပြောပါ။ Hydralazine 5-20 mg IV may repeat after 20 minutes; 25 mg BD and 50-300 mg in 2-4 doses;
ကိုယ်ဝန်သွေးဆိပ်တက်ခြင်း၊ (တက်သည့်အဆင့်) Eclampsia or Toxemia
PET ရှိနေရာမှ Fits (Convulsion) တက်သည်အထိ ဆိုးလာသည်ကို ခေါ်သည်။ မမွေးမီ-မွေးစဉ်နှင့် မွေးပြီးချိန်များ၌ တက်တတ်သည်။ သတိလစ်မည်။ မျက်စိအမြင်မကောင်းဖြစ်သည်။ တက်ပုံတက်နည်းမှာ အစတွင် ခြေလက်များ တင်းတောင့် ဆန့်မည်။ ထို့နောက် ကွေးကောက် လာမည်။ လျှာကို ကိုက်မိတတ်သည်။ အသက်ရှူကြွက်သားများ တက်၍ အသက်ရှူ မမှန်-ရပ်ဖြစ်တတ်သည်။ တခါတက်လျင် ၃ဝ စက္ကန့်ကြာသည်။ ပါးစပ်မှအမြှုပ်ထွက်မည်။ သွေးပါနိုင်သည်။ သတိမေ့သွားမည်။ အသက်ရှူသံ ပြင်ပြင်းကြားရမည်။ နှလုံးခုန်ရပ် တတ်သည်။ အတက်ရပ် ထိုးဆေးပေးရသည်။ Magnesium sulfate IV or Valium IV ပေးရသည်။ သိပ်မဆိုးလျင် ၃၆-၃၇ ပါတ်အထိစောင့်ပါ။ ဆိုလျင် ၃၁-၃၄ ပါတ် အထိစောင့်ပါ။ အမြန်မွေးအောင်လုပ်ပေးပါ။ လိုအပ်လျင် ခွဲမွေးပေးရတတ်သည်။
• (ရှိုး) အများကြီးဆင်းခြင်း၊ Heavy Show
• သားအိမ်ထဲတွင် အချင်းကွာခြင်း၊ Placental abruption
• အချင်းရှေ့ရောက်ဖြစ်ခြင်း၊ Placental Previa
• သားအိမ်ကွဲခြင်း၊ Rupture Uterus သားအိမ်ကွဲပါက သွေးသည် မွေးလမ်းမှ၎င်း ဝမ်းဗိုက်ထဲသို့၎င်း ထွက်မည်။
• မွေးလမ်း၏ တခြားနေရာမှ သွေးဆင်းခြင်း၊ သားအိမ်အဝရောဂါမှ ဆင်းခြင်း၊ ခိုက်မိခြင်း၊ ကင်ဆာဖြစ်ခြင်း၊
• Ectopic Pregnancy နေရာလွဲ၍ သားအိမ်ပြင်၌ သန္ဓေတည်ခြင်း၊
သားအိမ်တွင်း၌ အချင်းကွာခြင်း၊ Placental abruption (abruptio placentae)
ကိုယ်ဝန် ၂ဝ ပါတ် နောက်ပိုင်း မမွေးမီ သားအိမ်ထဲတွင် အချင်းကွာခြင်း။ ၁% ဖြစ် တတ်၊ ၂ဝ-၄ဝ% သေစေတတ်သည်။ မိခင် သွေးအားနည်းမည်။ သွေးသွင်းပေးရမည်။ (ရှော့ခ်) ရတတ်သည်။ လူကြီး-ကလေး ဒုက္ခရောက်တတ်သည်။ ဖြစ်လျင် ဆက်တိုက် ဗိုက်နာမည်။ ဗိုက်တင်းမည်။ သွေးဆင်းမည်။ သွေးအားနည်းခြင်း လက္ခဏာများ တွေ့ရ မည်။ LSCS ခွဲမွေးပေးရမည်။ သွေးသွင်းရန်လိုမည်။
အချင်းရှေ့ရောက်ဖြစ်ခြင်း၊ Placenta Previa အချင်းအနေအထားမမှန်ခြင်း
ဝ့၅% ဖြစ်နိုင်သည်။ မမွေးမီ သွေးဆင်းခြင်း APH ၏ အကြောင်းရင်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ဝန် ၂ဝ ပါတ်မှ မမွေးမီအတွင်း သွေးဆင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဗိုက်မနာဘဲ သွေးဆင်းသည်။ အရေးပေါ်ကိစ္စဖြစ်သည်။ သွေးအားနည်းခြင်း လက္ခဏာများ တွေ့ ရမည်။ မိခင်ရောကလေးပါ အန္တရာယ်ရှိသည်။ မွေးလမ်းကြောင်းမှမွေးမရ။ မွေးလမ်းကြောင်း စမ်းသပ်ခြင်း မလုပ်ရ။ LSCS ခွဲမွေးပေးရမည်။
Placental Praevia အချင်းရှေ့ရောက်ဖြစ်ခြင်း ၃ မျိုး
• Type I: အချင်းသည် သားအိမ်အဝထိသော်လည်း သားအိမ်ဝအားမဖုံး။
• Type II: အချင်းသည် သားအိမ်ဝအား တဝက်တပျက်ဖုံးသည်။
• Type III: အချင်းသည် သားအိမ်ဝအား လုံးဝဖုံးသည်။
အချင်းသည် သားအိမ်အဝအနီး၌သာရောက်သည်။ အချင်းသည် သားအိမ်အဝကို တဝက်တပျက်ဖုံးသည်။
အချင်းသည် သားအိမ်အဝအား လုံးဝဖုံးသည်။ အချင်းသည် သားအိမ်အဝအား ဖုံးနေရာမှ ကွာလာသည်။
27. Ectopic Pregnancy သားအိမ်ပြင်ပ၌ သန္ဓေတည်ခြင်း
ကိုယ်ဝန်သည် သားအိမ်ပြင်၌လည်း တည်တတ်သည်။ သားအိမ်လည်ပင်းပိုင်း၊ သားအိမ်ပြွန်ပိုင်း၊ မျိုးဥအိမ် (အိုဗရီ)၊ ဝမ်းဗိုက်ထဲတို့မှာ သန္ဓေတည်နိုင်သည်။ သားအိမ်ပြွန်ထဲ အများဆုံးဖြစ်တတ်သည်။ လရင့်လာသည်နှင့် ပေါက်ထွက်မည်။
ဖြစ်တတ်သူများ သားအိမ်ပြွန် ခွဲစိတ်ထားခြင်း၊ ယခင်ကလည်း ထိုသို့ဖြစ်ဖူးခြင်း၊ သားအိမ်ထဲ ကိုယ်ဝန်မရှိစေရန် ပစ္စည်း ထည့်ထားခြင်း၊ တင်ပဆုံတွင်း အင်္ဂါများရောင်ခြင်း၊ ကလေးမရသူ။ ယောက်ျားတယောက်မကနှင့်နေသူ။ သားအိမ်အတွင်း ရောဂါ။ ကိုယ်ဝန်တားဆေး။ ဆေးလိပ်သောက်သူ။ ငယ်ငယ်နှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်သူ။
ရောဂါလက္ခဏာများ၊ အရေးပေါ်ဖြစ်သည်။ ဗိုက်အောက်ပိုင်း အတင်းနာခြင်း၊ မွေးလမ်းမှ သွေးဆင်းခြင်း၊ (ရှော့ခ်) ရတတ် သည်။ ကိုယ်ဝန် ၇ ပါတ်၌ ဖြစ်တတ်သည်။
ကုသရန်။ အနာသက်သာဆေးပေးရမည်။ အရေးပေါ် ခွဲစိတ်ပေးရသည်။ Drips, Blood သွင်းပေးရန်လိုမည်။
Posted by Dr. Tint Swe at 11:17 PM